အရမျးကောငျးတယျ – My Blog
တဈနေ့ … ကနြျော ပထမနှဈကြောငျးပိတျတုနျးကပေါ့။ ဧပွီလနှရောသီကြောငျးပိတျတော့ အိမျကအဖရေယျ၊ အမရေယျ၊ ကနြျောရယျ သုံးယောကျသား ကားလေးနဲ့ ပွငျဦးလှငျကိုသှားလညျဖွဈတယျဗြ။ ကနြျောတို့နတောက မန်တလေးဆိုတော့ ပွငျဦးလှငျနဲ့ နခေ့ငျြးပွနျသှားလို့ရတယျ။ ဘာရယျမဟုတျပါဘူး။ တဈနကေုနျဟိုသှားဒီသှားလြောကျသှားကွမယျပေါ့။ မရောကျတာကွာတာလဲပါတာပေါ့။ မနကျစောစော မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကိုဝငျဖူးတယျ။ အဲဒီမှာစတှတေ့ာပဲ။ ဘုရားဖူးနရေငျးနဲ့ မလှမျးမကမျးမှာ ကောငျမလေးတဈယောကျကိုတှတေ့ာ..။ ကနြျောနဲ့ ရှယျတူလောကျတော့ရှိမယျ။ ကောငျမလေးတဈယောကျ ဆံပငျလေးမတိုမရှညျနဲ့ အသားဖှေးဖှေး၊ လူကောငျသေးသေးလေး၊ နှာခေါငျးလေးက ခြှနျခြှနျလေးနဲ့ နှုတျခမျးပါးလေးတှကေ နီနီလေး။ အဲဒီတော့ အီဖကေိုယျလဲ ဘုရားဖူးပွီးတာနဲ့ နှဈယောကျကြျောလောကျက ကောငျမလေးကို ခဏခဏလှမျးကွညျ့ဖွဈတယျပေါ့။
သူလဲ သူ့အဖအေမတေို့နဲ့လာတယျထငျတာပဲ။ သူနဲ့ပါလာတဲ့မိနျးမကွီးက သူနဲ့ရုပျခငျြးခပျဆငျဆငျတူတယျ။ သူနဲ့ ပါလာတဲ့ ဘိုးတျောကွီးနဲ့ ဘှားတျောကွီးက ဘုရားရှဈခိုးတာ တျောတျောနဲ့မပွီးဘူး။ သူလေးကတော့ ဘုရားရှိခိုးပွီးတာနဲ့ ဟိုဟိုဒီကွညျ့ရငျးကနြျောနဲ့ အကွညျ့ခငျြးသှားဆုံဖွဈတယျ။ သူလညျးကနြေျာ့ကို ခဏလောကျကွောငျပွီးကွညျ့နသေေးတယျ။ နောကျတော့မှ ခကျြခငျြးပဲဟိုဘကျပွနျလှညျ့သှားတယျ။ ကနြျောလညျး အမတေို့မပွနျမခငျြးကောငျမလေးကို ခဏခဏကွညျ့ကွညျ့နမေိတယျ။ ဘာလို့လဲမသိဘူး။ အဲဒီကောငျမလေးကို ကြှနျတျောအရမျးခဈြမိသှားသလိုပဲ။
မွငျမွငျခငျြးခဈြမိတယျဆိုတာ အဲဒီလိုမြိုးကိုချေါတာလားမသိဘူးနျော…။ နောကျတော့ အဖတေို့လညျး ဘုရားဖူးလို့ပွီးတော့ ဘုရားရငျပွငျတျောပျေါမှာတဈပတျပတျဖွဈတယျ။ အဲဒီမှာ သူလေးကိုနောကျတဈခါထပျတှသေ့ေးတယျ။ သူ့မကျြနှာလေးမွငျလိုကျတာနဲ့ ကနြေျာ့ရငျဘတျထဲက ဒိနျးကနဲ ၊ ဒိနျးကနဲခုနျခုနျလာတယျ…။ အငျး ခကျတော့ခကျနပွေီကောငျမလေးရယျ…။ နောကျလညျး ဆုံရဖို့မလှယျဘူး။ အဲလိုနဲ့ ကနြျောတို့ ဘုရားက ပွနျတော့ ပှဲကောကျရတေံခှနျဝငျတယျ။ ပှဲကောကျမှာမြားတှေ့ဦးမလားဆိုပွီး ကနြျော ဟိုဟိုဒီဒီရှာကွညျ့မိသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကံတရားက ကနြေျာ့ဘကျမှာမရှိဘူးဗြာ…။ ဖွူဖွူသေးသေးကောငျမလေးကိုကြှနျတျောမတှရေ့ဘူး။ ပှဲကောကျရတေံခှနျက ပွနျတော့ ပိတျခငျြးမွောငျကိုသှားတယျ…။ ပိတျခငျြးမွောငျက လှိုငျဂူကွီးဆိုတော့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ ကနြေျာ့အမထေဲ အထဲထိမဝငျဘူး။ အထဲမှာအသကျရှုကပျြတယျလေ။ အမမေဝငျဘူးဆိုတော့ ကနြေျာ့အဖလေညျး အပွငျမှာစောငျ့နခေဲ့တယျပေါ့… ဟဲဟဲ…. ဒါက သဘာဝပဲလေ…။ သား… အထဲသှားခငျြရငျသှားလေ ဆိုတာနဲ့ ကနြျောလညျး အထဲကို ဝငျဖွဈတယျ။ ကနြျော အထဲကိုသာသှားနတော။ စိတျထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး..။ အဲ… ဘာမှမရှိဘူးတော့မဟုတျဘူး။ မနကျက မငျးသမီးလေးအကွောငျးပဲ ကြှနျတျောတှေးမိနတော..။ ကနြျောနဲ့ ဘယျလိုမှမဆုံနိုငျတဲ့ ဘဝမဟုတျပါလား။ သခြောတာတဈခုကတော့ သူလေးကို ကနြျော တျောတျောလေးခဈြမိနပွေီပဲဆိုတာပေါ့။ သူ့မကျြနှာလေးမွငျပွီးကတညျးက ဘာကိုပဲကွညျ့ကွညျ့ သူ့မကျြနှာလေးပဲမွငျမွငျနတောလေ။
ပိတျခငျြးမွောငျဂူအဆုံးထိလြှောကျပွီးသှားတော့ ဘုရားဖူးမယျဆိုပွီး အစှနျနားလေးမှာထိုငျလိုကျတယျ။ ဘုရားရှိခိုးပွီးတော့ ဘုရားမှာဆုတောငျးမိတယျ။ မနကျက ကောငျမလေးနဲ့ ပွနျပွီးဆုံတှရေ့ပါစသေားပေါ့။ ဆုတောငျးပွီးလို့ မကျြလုံးလဲဖှငျ့ကွညျ့လိုကျရော…. ကနြေျာ့ရငျဘတျကွီးထဲမှာ ဒိနျးကနဲဖွဈသှားပွနျတယျ…။ ကနြေျာ့မကျြလုံးထောငျ့စှနျးမှာ ဘုရားရှိခိုးနတေဲ့ သူလေးကို ဖတျြခနဲတှလေို့ကျမိလို့…။ ကောငျမလေးရဲ့ ဘေးနားကို တဈခကျြကွညျ့တော့ မနကျက ဘိုးတျောကွီးတို့ပါမလာဘူး။ ကွညျ့ရတာ သူလညျး ကနြေျာ့လိုပဲထငျတယျ။ တဈယောကျထဲအပျေါတကျလာတာ။
ဆံပငျလေးကို ဖွောငျ့စငျးပွီး ရှရေောငျဆံပငျလေးဆိုထားနဲ့ ပုံလေးကို ကနြျောနောကျကနတေစိမျ့စိမျ့ကွညျ့နမေိတယျ။ ဒီလိုအခြိနျလေးတှမေကုနျဆုံးပါရစနေဲ့…။ ခဏလောကျကွာတော့ သူ ကနြေျာ့ဘကျကို ဖွတျခနဲလှညျ့ကွညျ့တယျဗြ။ ကနြျောလညျး ဘာလုပျရမှနျးမသိတာနဲ့ သူ့ကို ရယျပွလိုကျတယျ။ သူလညျးကနြေျာ့ကိုပွနျပွီးရယျပွတယျထငျတာပဲ။ ရငျတှခေုနျလှနျးလို့ ဘာဖွဈလို့ ဖွဈနမှေနျးကိုမသိတော့တာ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ကနြေျာ့ရှတေ့ညျ့တညျ့မှာထိုငျနတေဲ့အတှဲက ထထှကျသှားတယျ။ ကံကောငျးတယျလို့ပွောရမှာပေါ့။ ကနြျောနဲ့ ကောငျမလေးကွားထဲမှာ ဘယျသူမှမရှိတော့ဘူး။
ကနြျောလညျး ဖငျကိုတရှတျတိုကျဆှဲပွီးသူ့နားကို အသာလေးတိုးသှားလိုကျတယျ။ ”ဘုရားလာဖူးတာလား…။” သူ လှညျ့ကွညျ့တယျ။ ဘာမှတော့ပွနျမပွောဘူး။ ”မနကျကလညျးတှတေ့ယျနျော။ ပွငျဦးလှငျကိုလာလညျတာလား။” ကနြျော တညျတညျတံ့တံ့ပဲ နှဈလိုဖှယျကောငျးတဲ့ မကျြနှာမြိုးနဲ့ ပွောလိုကျမိတယျ။ သူ့ကို နှောကျယှကျတဲ့ တလေဂေပြိုးလို့ မထငျစခေငျြဘူးလေ။ ”အကောငျးနဲ့မေးတာပါ။ ခရီးသှားတဲ့လူခငျြးအတူတူဆိုတော့လေ…။ ကိုယျက မနျးလေးကလာတာ။ ဒီကိုမရောကျတာကွာလို့..။” ”ခြိုက ပွငျဦးလှငျမှာပဲနတော..။ မွငျးခွံက အဒျေါလာလို့ လိုကျပို့တာ…။” သူလေးဆီက ဘယျလိုမှမထငျမှတျထားတဲ့ အသံလေးကိုကွားလိုကျရတယျ။ ကောငျမလေးရဲ့ နာမညျလေးကိုပါတဈခါထဲသိလိုကျရတယျ…. ခြိုတဲ့….။
သူလေးနဲ့ တှရေ့တာ ကိုယျ့ရငျထဲမှာလညျး ခြိုမွသှားတာပါပဲ ကောငျမလေးရယျ…။ ”မပွနျသေးဘူးလား။ အောကျမှာ အဒျေါတှစေောငျ့နတေယျမဟုတျလား။ ”ကနြျော စကားမရှိစကားရှာပွီးလြှောကျပွောဖွဈတယျ။ ”အငျး….။ ပွနျတော့မှာ…။ခြို ဒီသရကျပငျကွီးကိုတှတေို့ငျး သရကျသီးတှခေူးခူးစားခငျြလို့ ကွညျ့နတော…။” ”အာ…. ခြိုကလညျး ဒါက သရကျပငျအတုကွီးဟာကို ဘယျလိုလုပျသရကျသီးခူးစားလို့ရမှာလဲ…။” သူကလညျး ခြိုဆိုတာနဲ့ ကနြျောလညျး ကောကျပွီးခြိုပလိုကျတယျ…. မှတျကရော…။ ”ဟီး… ဟုတျတယျနျော…. သရကျပငျအတုကွီးပဲဥစ်စာ။” ကနြေျာ့ကို ခပျပွုံးပွုံးလေးကွညျ့ရငျး ရယျပွီးပွောတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ခြို့ကို ပွနျပွီးရယျပွဖွဈတယျထငျတာပဲ။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာသိလိုကျတာတော့ ကနြျောနဲ့ ခြို ခငျသှားပွီဆိုတာပဲ။
”တူတူပွနျဆငျးရအောငျလေ…။” ကနြေျာ့သူ့ကို ပွနျဖို့ပွောတော့ သူလဲ အငျး ဆိုပွီး ထလာတယျ။ ပိတျခငျြးမွောငျဂူထဲက ပွနျအထှကျမှာ ကြောကျနံရံကွားကထှကျလာတဲ့ရတှေကေို လကျနဲ့လိုကျလိုကျဆော့နလေို့ ကနြေျာ့ မှာ ခြို ဓာတျလိုကျမှာစိုးလို့ မနညျးလိုကျဆှဲရတယျ။ သူကတော့ စပျဖွဲဖွဲနဲ့ တကယျ့ကလေးလေးတဈယောကျလိုပဲ…။ ဂူအပွငျနားရောကျခါနီးမှာ နှဈယောကျလုံး မတိုငျပငျပဲနဲ့ အလိုကျတသိလမျးခှဲပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ။ ပွငျဦးလှငျက အပွနျလမျးမှာတော့ ကြှနျတေျာ့ရငျထဲမှာ ခြိုဆိုတဲ့ ကောငျမလေးက ကပျပွီးတော့ပါလာပွီ။ ကနြျော အိမျရောကျရောကျခငျြးပဲ သူ့ကို သတိရလှနျးလို့ ဖုနျးဆကျမလို့ စဉျးစားသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ သူ့ နဲ့မတှမှေ့ာစိုးလို့ သူပေးတဲ့ဖုနျးနံပါတျကို မဆကျဖွဈဘူး။ တကယျတော့ ကနြျောကသာကွောကျနတောပါ။ သူပေးထားတာ သူကိုငျတဲ့ လကျကိုငျဖုနျးနံပါတျဆိုတော့ ဘယျသူနဲ့မှတှစေ့ရာမရှိပါဘူး။ ညရောကျမှ ဆကျတော့မယျဆိုပွီး ကြှနျတျော အောငျ့ထားလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ ညရောကျဖို့ တျောတျောလေးကွာတယျလို့ ခံစားမိတယျ။ အဲလိုနဲ့ ညရောကျတော့ ကြှနျတျော ခြို့ဆီကို ဖုနျးဆကျဖွဈတယျ။ ”ဟိတျ…. ဘယျသူလဲ သိလား…။” ” သိတယျ….။ နလေ့ညျက ပိတျခငျြးမွောငျမှာတှတေဲ့ တဈယောကျမဟုတျလား။” ”အငျး.. ဟုတျတယျ ။ ဘယျလိုလုပျသိတာလဲ။” ”ဒီလိုပဲပေါ့…။” စကားဆုံးတော့ သူမ ဆီက ရယျသံလှငျလှငျလေးကိုကွားရတယျ။ ”ကိုယျ ဖုနျးဆကျမှာကို မြှျောနတောမဟုတျလား…” လို့ ကနြျောစတော့.. ”မမြှျောပါဘူး။
ဘာလို့ မြှျောရမှာလဲ…။ နလေ့ညျက လူကို ခဏခဏငမျးကွောထနတေဲ့ တဈယောကျက ဖုနျးနံပါတျတောငျးသှားတော့ သူပဲဖွဈမယျဆိုပွီးသိတာပေါ့။ ပွီးတော့ ခြို့ဆီကို လာတဲ့ဖုနျးမှမြားမြားစားစားမရှိတာ။” ”ဟုတျလား….။ ခြို့ဆီကို ကောငျလေးတှဖေုနျးမဆကျဘူးလား။” ”မဆကျပါဘူး။ ခြိုကမှပွနျမပွောတာ။ မသိရငျလုံးဝမကိုငျဘူး။” ”အခု ကိုယျ့ဖုနျးကတြော့ရော….။” ”အဲဒါက သူ ဆကျတဲ့ဖုနျးမှနျး ခြို့ စိတျထဲမှာသိနလေို့ကိုငျလိုကျတာ…။” ”ဒါဆို ခြိုက ကိုယျ့ကို ခငျတယျပေါ့။” ”အငျး…. ။ ဘယျလိုမှနျးမသိဘူး။ သူ့ကိုလေ… ခြို မွငျမွငျခငျြး ခငျမိသလိုခံစားရလို့…။” ”ဘယျက ‘သူ’ လဲ…။” ”အခု ဟိုဘကျက ဖုနျးနတေဲ့သူ ပေါ့။” ”အျော…..။
ဟုတျသားပဲ။ ခြိုက ကိုယျ့နာမညျမှမသိသေးတာ…။ ကိုယျ့နာမညျက ကြျောသူစိုးတဲ့…။” ”ဟုတျလား…။ ငယျငယျကတျောတျောဆိုးတယျထငျတယျ…။ နာမညျက ကြျောသူဆိုး ဆိုတော့…။” ”အာ… ကှာာာ…. မဟုတျပါဝူး…။ ကြျောသူဆိုးမဟုတျဘူး….။ ကြျောသူစိုး…။” ”ဟုတျပါပွီ… ကြျောသူစိုးဆိုတော့လညျး ကြျောသူစိုးပေါ့။ ခဈခဈ ” အဲလိုနဲ့ ပထမဆုံးနမှေ့ာပဲ သူမနဲ့ ကနြျော စပွီး ခငျမငျမှုရခဲ့တယျ။ ဧပွီလကြောငျးပိတျရကျ တဈလလုံး သူမနဲ့ညတိုငျးဖုနျးပွောဖွဈတယျ။
ကြှနျတေျာ့မိသားစုအကွောငျး ၊ သူမရဲ့ မိသားစုအကွောငျးပေါ့။ ခြိုနဲ့ မနကျပိုငျးတော့ ဖုနျးမပွောဖွဈဘူး။ သူ့ အိမျက ဆှယျတာဆိုငျဆိုတော့ တဈနကေုနျ ဆိုငျမှာကူထိုငျပေးရတယျ။ တဈခါတလေ ဆိုငျမှာလူရှငျးရငျတော့ လူဆိုးလေး… ဘာလုပျနလေဲ ဘာညာနဲ့ message တှပေို့တယျ။ ကနြျောက သူ့ကို ခြိုလို့ပဲချေါပမေဲ့ သူကတော့ ကြှနျတေျာ့ နာမညျမှာ စိုး ပါတာနဲ့ လူဆိုးလေးဆိုပွီး ချေါတယျ။ တကယျတော့ ဘာမှလဲ မဆိုငျပါဘူးနေျာ့…။ အဲလိုနဲ့ ဧပွီလကုနျလို့ ကြောငျးတှပွေနျဖှငျ့တော့ ကြောငျးပွနျတကျရတယျ။ ကနြျောက မနျးလေးမှာပဲ ကြောငျးတကျတယျလေ။ သူကတော့ ပွငျဦးလှငျတက်ကသိုလျမှာပဲ BC Major တကျတယျ။ ကနြျော ခြို့ကို မေးကွညျ့ဖူးတယျ။ ”ခြိုကဒီလောကျခြောတာ မဂြောကှငျးမရဘူးလား”လို့ပေါ့။
သူမ ရီပွီးတော့ပွနျပွောတယျ။ ”ခြိုက သူမြားတှကေို အယျစတုံကွီးတှမှေမဟုတျတာ…။ ဘယျလိုလုပျကှငျးရမှာလဲ”တဲ့။ ဟုတျလညျးဟုတျတယျ။ ခြိုက ပိနျပိနျပါးပါးလေး။ အရပျက ငါးပနှေဈလောကျပဲ ရှိတယျ။ ကနြျောနဲ့ယှဉျရငျတော့ ပုမှာပေါ့။ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ဆိုရငျတော့အတျောလောကျပါပဲ။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာလညျး ပိနျပွီး အရမျးအရပျရှညျတဲ့မိနျးကလေးတှဆေိုရငျ ကလနျကလားနဲ့ ကွညျ့မရဘူး။ ကြောငျးဖှငျ့ပွီးပွီးခငျြးပဲ ခြို့ကို ကြှနျတျော ဖှငျ့ပွောလိုကျတယျ။ ဘာရယျမဟုတျဘူး။ စာတှကေလညျးမြားတာနဲ့ စိတျညဈပွီး ဖှငျ့ပွောလိုကျတာ…။ အဲလိုနဲ့ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ပွီး နှဈလလောကျကွာတော့ ခြို့ဆီက အဖွပွေနျရတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ အဖွရေတဲ့နကေ့ သူမမှေးနေ့။ ခြိုက ကနြေျာ့ထကျတော့ နှဈလကြျောကြျောလောကျငယျတယျ။
လူ့ သဘာဝဆိုတာကလညျး ဆနျးကွယျသားနျော..။ ညတိုငျးဖုနျးပွောရုံနဲ့လညျး မတငျးတိမျဘူးဖွဈလာတယျဗြာ။ အဲဒါနဲ့ သူနဲ့လာတှလေို့ရမလားဆိုတော့.. ခြိုကလညျး ”ကြောငျးဖှငျ့ရကျ တဈရကျလာခငျြတှလေ့ေ” တဲ့…။ တကယျတော့ ခြိုတို့အိမျကအရမျးစညျးကမျးကွီးတယျဗြ…။ ဒီအရှယျကွီးရောကျတဲ့အထိ ခြို ကို သူ့အဖကေ ကားနဲ့ အပို့အကွိုလုပျတုနျးပဲ…။ ကြောငျးဖှငျ့ရကျ လာတှခေို့ငျးတာက သူ့အိမျက လိုကျပို့ပွီးရငျ ကြောငျးတကျခငျြယောငျဆောငျပွီးမှ ကနြျောနဲ့ အပွငျထှကျလညျမလို့လေ..။ အဲဒါနဲ့ ကနြျောလညျး ကမနျးကတနျး ဗိုလျသငျတနျးတကျနတေဲ့ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးတဈယောကျကို ကမနျးကတနျးအပူကပျပွီး စုံစမျးရတယျ။
ပွငျဦးလှငျက အတှဲတှထေိုငျလို့ကောငျးတဲ့ဆိုငျတှရေယျ၊ ရုပျရှငျရုံရယျ၊ ပွီးတော့…. ဟီးဟီး…. ပိတျသတျကွီးသိတဲ့အတိုငျးပဲပေါ့။ ပွီးတော့ နလေ့ညျပိုငျး လြောကျလညျဖို့ဆိုငျကယျတဈစီးလညျးငှားရတာပေါ့ဗြာ…။ အဲဒါကတော့ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးကြေးဇူးနဲ့ မွို့ခံသူ့သူငယျခငျြးဆီကပဲ ဟှနျဒါဆိုငျကယျအကောငျးစားတဈစီးကို အလကားငှားလို့ရလိုကျတယျ…။ အဲ…. ကိုယျကတော့ ဆီထညျ့ပေးရတာပေါ့နျော..။ ပထမတဈခေါကျသှားတှတေု့နျးကတော့ လကျလေးကိုငျ၊ သူကလညျး ဆိုငျကယျစီးရငျ ကနြေျာ့ခါးလေးဖကျစီးပေါ့။ အအေးဆိုငျထိုငျတော့လညျး လူလဈရငျ ခြို့ပါးလေးကို ခိုးခိုးနမျးပေါ့။ သူမကတော့ ကနြျောနမျးလိုကျတိုငျး ပါးပွငျဖွူဖွူနုနုလေးမှာ ပနျးရောငျလေးတှဖွောနတောပဲ…။ ကနြျော တအားဖိနမျးလို့ ဖွဈတယျလို့မထငျနဲ့နျော ပိတျသတျကွီး…။
ကနြျောနမျးတာဖှဖှလေး၊ သူ့ဘာသာသူ အနမျးမခံဖူးလို့ ရှကျသှေးဖွာတာ..။ ပထမတဈခေါကျတော့ လကျလေးကိုငျလိုကျ၊ ပါးလေးနမျးလိုကျနဲ့ပဲ ပွီးသှားတယျ။ အခြိနျကလညျးသိပျမရဘူးမဟုတျလား။ အပွငျမှာ စတှတှေ့ခေ့ငျြးဆိုတော့ နှဈယောကျလုံးပွောစရာစကားတှမြေားလှနျးတာနဲ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျတှတျထိုးနလေိုကျတာ မပွီးနိုငျဘူး….။ ပွနျခါနီးအခြိနျရောကျတော့မှပဲ မခှဲခငျြခှဲခငျြနဲ့ သူတို့ကြောငျးဝငျးထဲကို လိုကျပို့လိုကျရတယျ။ နောကျထပျတှဖွေ့ဈတော့ အေးအေးဆေးဆေးတှခေ့ငျြတယျကှာဆိုပွီး ရုပျရှငျတူတူသှားကွညျ့ဖွဈတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့တယျသာပွောတာပါ.. တကယျတနျးကတြော့ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ ဘာကားပွမှနျးတောငျမသိပါဘူး။ ဘာကားမှနျးမပွောနဲ့ မငျးသားမငျးသမီးဘယျသူဆိုတာတောငျ အသံကွားလို့ပဲ သိတာ…။
ပိတျကားကို ကွညျ့လို့သိတာမဟုတျဘူး။ ခြို့ နှုတျခမျးပါးလေးကို အမွဲနမျးနတော။ နမျးလိုကျတိုငျးလညျး နမျးလို့မဝဘူး။ နှေးနှေးလေးနဲ့ ခြိုခြိုအီအီလေး… ၊ တကယျပဲ နာမညျနဲ့လညျးလိုကျပါတယျ။ ရုပျရှငျအလယျလောကျရောကျတော့ ကနြေျာ့လကျက တဖွညျးဖွညျးနယျခြဲ့လာတယျ။ ခြို့ နို့လုံးလုံးလေးတှကေို အကြီပျေါနအေုပျကိုငျပွီးပှတျတာပေါ့။ ခြိုလညျးနမျးရငျးနဲ့ စိတျပါလာလို့ထငျတယျ။ ကနြျော သူ့နို့လေးတှကေို ပှတျပေးတာကိုဘာမှမပွောဘူး။ သူကဘာမှမပွောတာနဲ့ ကနြျောလညျး အကြီအောကျနလေကျကို အသာလေးလြိုပွီး သူ့နို့လေးတှကေို ကိုငျလိုကျတယျ။
ခြိုဝတျထားတဲ့ အကြီက တီရှပျအပြော့သားဆိုတော့ ကောငျးကောငျးလကျလြိုသှငျးလို့ရတယျ။ ဘျောလီကလညျး အပြော့သားခပျသေးသေးလေးဆိုတောဘျောလီကို အသာလေးအောကျကို ဆှဲခပြွီး အဖုံးအကာမရှိတဲ့ နို့အိအိလေးတှကေို စမျးမိတယျ။ နို့လေးတှကေ လိမ်မျောသီးခပျလတျလတျအရှယျလောကျပဲရှိမယျထငျတယျ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ သေးသေးလေးတှေ။ ရုပျရှငျရုံအမှောငျထဲမှာဆိုတော့ နို့သီးခေါငျးလေးတှဘောရောငျလဲဆိုတာတော့မမွငျရဘူး။ ဒါပမေဲ့ သခြောပါတယျ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ ပနျးရောငျလေးတှပေဲဖွဈမှာပါ။ အပျေါပိုငျးကို နယျခြဲ့လို့ တျောတျောလေးကွာတော့ အောကျပိုငျးကို နယျခြဲ့ဖို့ကွိုးစားဖွဈတယျခငျဗြ။ ခြိုဝတျထားတာက ထမိနျစကတျ ၊ ထမိနျစကတျဝတျဖူးတဲ့သူတှဆေိုရငျတော့သိမှာပါ… (အဲ မှားကုနျပွီ ကနြျောဝတျဖူးတယျလို့ပွောတာမဟုတျဘူးနျော) ထမိနျစကတျဝတျတဲ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ တှဖေူ့းရငျတော့သိကွမှာပါ။
ထမိနျစကတျက တဈကှငျးလုံးခြှတျစရာမလိုဘူးဗြ၊ ခါးမှာခြိတျထားတဲ့ခြိတျကိုလညျး ဖွုတျစရာမလိုဘူး။ ထပျထားတဲ့ထမိနျနှဈလှာကွားကို အသာလေးလကျလြိုသှငျးလိုကျ၊ ခငျဗြားတို့နားလညျအောငျကနြျောလညျး မပွောတတျတော့ဝူးဗြာ..၊ ထမိနျမှာ သုံးလှာ တို့ လေးလှာတို့ ခြုပျဝတျကွတာသိတယျမလား၊ မသိရငျလညျးထားလိုကျတော့၊ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ ဘယျရောကျသှားပွီလဲ…။ အငျး… လကျကို ထမိနျအလှာနှဈခုကွားထဲအသာလေးလြိုသှငျးလိုကျ၊ ဆီးစပျနားလေးမှာ V shape အခှဲလေးရှိတယျဗြ…၊ လကျကအရမျးမကွီးဘူးဆိုရငျ အသာလေးလြိုသှငျးလိုကျရငျ အဖုတျလေးနဲ့ကှကျတိပဲ။ အတှငျးခံဝတျထားရငျတော့ ရှကွေုတျလေးနဲ့ တိုကျရိုကျမတှဘေူ့းပေါ့ဗြာ..၊ ညီမလေးပျေါက ပငျတီလေးကိုပဲစမျးမိမှာပေါ့။ ပွောရငျးနဲ့ ခြျောကုနျပွီ။ အဲလိုနဲ့ ကနြျောလညျး ခြိုရဲ့ ထမိနျစကတျလေးထဲကို အလိုကျသငျ့လေးလကျကိုထိုးသှငျးလိုကျတော့ ခြို့အဖုတျလေးကိုစမျးမိတယျဗြာ၊ ပငျတီပျေါကပေါ့။
အဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးက နုပွီးအိနတောပဲ။ တျောတျောကို ကောငျးတဲ့အထိအတှပေ့ါ။ ခငျဗြားတို့ကို မွငျအောငျပွောပွရမယျဆိုရငျ ပူစီ ဘိတျကရီကထုတျတဲ့ ကွကျဥကိတျမုနျ့လေးကို စမျးမိသလိုပဲ။ နောကျပိုငျး ကနြျော ပူစီ ကွကျဥကိတျမုနျ့စားရငျတောငျ ဒီကိတျမုနျ့ က နာမညျနဲ့လဲလိုကျပါတယျလို့တောငျ တှေးမိသေးတယျ။ ( ပူစီမုနျ့တိုကျပိုငျရှငျသိရငျ ကနြေျာ့ကိုတရားလာစှဲနဦေးမယျ… ခှိ… ) ခြိုရဲ့ ညီမလေးက အရညျတှတေျောတျောထှကျနပွေီဗြ။ ပငျတီလေးမှာဆို ရှဲနဈနတောပဲ။ ကနြျောလညျး လကျလေးနဲ့ အသာဖိဖိပွီးပှတျပေးတာပေါ့။ တဈခကျြတဈခကျြလညျး ညီမလေးအထဲကို လကျတဈဆဈလောကျထညျ့ထညျ့ပွီး မှပေေးတယျ။ အထဲကိုတော့ အမြားကွီးထိုးမထညျ့ပါဘူး။ အမှေးလေးရှိသေးရငျ ညီတျောမောငျအတှကျခနျြထားမလို့လေ။
ခြိုနဲ့ နှုတျခမျးခငျြးတစေု့တျရငျး လကျတဈဘကျက နို့လုံးလုံးလေးတှကေို ခြေ၊ နောကျလကျတဈဖကျက ရှကွေုတျလေးကို မှလေိုကျတာ၊ တအောငျ့လောကျကွာတော့ ခြိုလညျး တရှုးရှုးဖွဈလာပွီး အနမျးတှကွေမျးလာတော့တာပဲ။ သူ့လကျနှဈဖကျက ကနြေျာ့ခေါငျးကိုတငျးတငျးဆုတျရငျး နဲ့ ခပျကွမျးကွမျးနမျးလာတာ။ ကနြျောလညျး ခြိုပွီးတော့မယျဆိုတာ ရိပျမိတာနဲ့ အောကျကိုနယျခြဲ့ထားတဲ့ လကျတဈဖကျကို ခပျသှကျသှကျလေးလှုပျရှားပေးလိုကျတော့ အသာလေးကားပေးထားတဲ့ ပေါငျလေးနှဈခြောငျးက ရုတျတရကျစိသှားပွီး တဈကိုယျလုံးတှနျ့ပွီး တဈခါပွီးသှားတယျဗြာ…။ သူ့ နှုတျခမျးကတော့ ကနြေျာ့ နှုတျခမျးနဲ့ မခှာသေးဘူး၊ တပျရကျပဲ။ တပွှတျပွှတျနဲ့နမျးနတောပေါ့။ တဈခကျြတဈခကျြဆို အသံပါထှကျတယျ။
တျောသေးတယျ ၊ ရုပျရှငျက အသားကုနျ ရနျဖွဈနတေဲ့ကားမို့လို့သာပဲ။ နို့မို့ဆိုရငျ ကနြျောတို့နမျးတဲ့အသံတှေ ဘေးခုံကကွားသှားလောကျတယျ။ ရုပျရှငျပွီးတော့ ရုံထဲကနေ လူတှအေကုနျကုနျမှ ထှကျဖွဈတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခြို့ထမိနျအောကျမှာ ကှကျနလေို့၊ ကှကျနတောမှ အကွီးကွီးကှကျနတော၊ ဝတျထားတဲ့ထမိနျကလညျး အနကျရောငျမဟုတျတော့ မွငျရတယျလေ၊ ကှကျကှကျကှငျးကှငျးပဲ။ ကနြျောအပျေါက ထပျဝတျထားတဲ့ အပျေါအကြီကိုခြှတျပေးပွီး ခြို့ကို ခါးမှာစညျးခိုငျးထားလိုကျရတယျ။ နို့မို့ရငျမလှယျဘူး။ အရှကျတှကှေဲကုနျမှာ။
အခု အပျေါကအကြီထပျစညျးထားတာလညျး သိကွမှာပါပဲ။ ကနြျောနဲ့ ခြိုလညျး ခေါငျးလေးအသာငုံ့ပွီးထှကျလာကွတာဆိုတော့ တခွားသူတှဘေယျလိုနမေလဲ မသိလိုကျဘူး။ ခြိုကတော့ အသားဖွူတဲ့သူဆိုတော့ မကျြနှာတဈခုလုံးရဲနတောပဲ။ သူလညျးရှကျမှာပေါ့။ ဒီတဈခေါကျပွငျဦးလှငျသှားတာ ခြိုနဲ့တျောတျောလေးခရီးရောကျခဲ့တယျလို့ပွောရမယျ။ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ နို့ကိုငျရုံတငျမဟုတျဘူး၊ ညီမလေးကိုပါ နယျခြဲ့လိုကျတာမဟုတျလား။ အဆုံးစှနျအထိလုပျဖို့တော့ စိတျကူးမရှိပါဘူး။ နှဈယောကျလုံးကလကျထပျဖို့အထိ စိတျကူးထားကွတာဆိုတော့ မင်ျဂလာဦးညမှာရငျခုနျဖို့ ခနျြထားဦးမှ လို့ တှေးမိလို့လေ။
ကနြျောလညျး ခြိုရှိတဲ့ပွငျဦးလှငျကို ခဏခဏသှားဖွဈတယျ။ ဘယျလောကျထိသှားဖွဈလဲဆိုရငျ တဈလထဲကိုခွောကျခေါကျလောကျကမြယျထငျတာပဲ။ ပွငျဦးလှငျကလညျး လညျစရာတှအေပေါသားဆိုတော့ ဘုရားတှလြှေောကျဖူး၊ အတှဲတှအေေးအေးဆေးဆေးထိုငျလို့ရတဲ့ အအေးဆိုငျလေးတှမှောထိုငျ၊ တဈခါတဈခါကတြော့လညျး ရုပျရှငျကွညျ့ဖွဈတာပေါ့။ ရုပျရှငျကတော့အခေါကျတိုငျးမကွညျ့ဖွဈဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အခြိနျကုနျတယျဗြ။ ကနြျောသူနဲ့လညျလို့ရတဲ့အခြိနျက ကြောငျးတကျခြိနျလေးပဲဆိုတော့သိပျမမြားဘူးလေ။ ပွီးတော့ရုပျရှငျရုံကလညျး ခပျသေးသေးဆိုတော့ ရုပျရှငျ တဈကားနဲ့ တဈကားကတျောတျောနဲ့ခြိနျးတာမဟုတျဘူး။ တျောကွာတဈကားထဲကို နှဈခါသုံးခါပွနျကွညျ့ရငျ ရုပျရှငျရုံကလူတှဟေားမှာကွောကျတာလညျးပါတာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ရညျးစားဖွဈပွီးတာ နှဈလလောကျကွာတော့ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ဖွဈတယျ။
ရုပျရှငျကွညျ့တာတော့ မဟုတျဘူးပေါ့ဗြာ။ ထုံးစံအတိုငျး သှားသှားနမျးတာပေါ့။ ကနြျော ဒီတဈခေါကျမတိုငျခငျမရောကျဖွဈတာ တဈပတျလောကျကွာသှားတော့ လူကလညျးတျောတျောလေး ကွှနတော။ သူလညျး အဲလိုပဲထငျတာပဲ။ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျနမျးရငျးပွုရငျးနဲ့ စိတျကမထိနျးနိုငျတော့ဘူး။ ကနြေျာ့ ညီတျောမောငျကို ဘောငျးဘီထဲက အသာထုတျပွီး ခြို့ကို ကိုငျခိုငျးလိုကျတယျ။ပွောသာပွောတာ။ ကနြေျာ့ ညီလေးကို သူတဈခါမှမတှဖေူ့းသေးဘူး။ ကနြျောကသာ လကျသရမျးပွီး သူ့ကို လိုကျကိုငျနတော။ သူလညျး ကနြေျာ့ ညီလေးကိုကိုငျရငျး လူက တဈရှုးရှုးဖွဈလာတယျ။
ကနြေျာ့ မကျြနှာကို လာလာထိတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝငျသကျထှကျသကျတှကေ အတျောလေးမွနျလာတယျလေ။ ကနြျော ခြို့ကို တဈခါပွီးသှားအောငျလကျနဲ့ပဲလုပျပေးပွီးတော့ ခြိုက ကနြေျာ့ကိုတိုးတိုးလေးညီးတယျ။ ”လူဆိုးလေး…. အရမျးခဈြတယျကှာ…။ အတူတူနခေငျြပွီတဲ့….။” တကယျတော့သူပွောတဲ့အတူတူနခေငျြပွီဆိုတာက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျလကျထပျပွီး အတူတူနခေငျြတာကိုပွောတာနမှောပါ။ ကနြျောလညျး ပထမလကျထပျတဲ့အထိစောငျ့ထိနျးမယျလို့ စိတျကူးထားပမေဲ့ ခြို့ရဲ့ စကားသံလေးကို ကွားလိုကျရတော့ ဘယျလိုမှမနနေိုငျတော့ဘူး။ ”ရုပျရှငျပွီးရငျ တဈနရောရာသှားရအောငျကှာ…။” ကနြေျာ့ပါးစပျက လှတျကနဲထှကျသှားတယျ။ ခြို တဈခကျြငွိမျသှားတယျ။ သူလညျးစဉျးစားနတေယျထငျပါတယျ။
ပွီးတော့ ခပျလေးလေးတဈခကျြပွောတယျ..။ ”အငျး….သှားမယျလေ” တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကနြျောနဲ့ ခြို ရုပျရှငျပွီးတော့ မွို့ပွငျက ဟိုတယျတဈခုကိုရောကျသှားကွတယျ။ ဟိုတယျရှာရတာတော့သိပျမခကျပါဘူး။ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးက ကနြျောသှားခငျြသှားရအောငျဆိုပွီးပွောထားလို့ သိပွီးသားဆိုတော့ သိပျမရှာလိုကျရဘူး။ ဟိုတယျရီစကျပျရှငျကို ဖွတျတော့ ခြိုတျောတျောရှကျနတေယျထငျတယျ။ ခေါငျးကိုလုံးဝမဖျောဘူး။ ကနြျောကတော့ ခပျတညျတညျပေါ့ဗြာ..။ ကိုယျ့မွို့မှမဟုတျတာပဲ။ ဘယျသူမှသိတာမှမဟုတျတာ။ အဲလိုနဲ့ အခနျးလေးထဲရောကျတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျထိုငျကွညျ့ပွီး ဘာစကားမှမပွောဖွဈကွဘူး။
ဇာတျလမျးတှထေဲမှာသာ အခနျးထဲရောကျတာနဲ့ နှုတျခမျးခငျြးဖကျနမျးပွီး အဝတျတှကေမနျးကတနျးခြှတျကွတာ။ ကနြျောနဲ့ ခြိုကတော့ တျောတျောကွာအောငျတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ထိုငျကွညျ့နကွေတာ။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာတှေးမိတာတော့ ကနြျောဒီကလေးလေးကိုချေါလာတာမှားမြားမှားသှားပွီလားပေါ့။ ကနြေျာ့သူ့ကို လကျမထပျခငျအထိ လှနျလှနျကြူးကြူးလုပျဖို့ လုံးဝစိတျကူးမရှိဘူးလေ။ တအောငျ့လောကျနတေော့ ခြို့ဆီက သကျပွငျးခပြွီး စကားတဈခှနျးပွောလာတယျ။ ”ကို.. ခြို့ကို တကယျယူမှာလား” တဲ့….။
ကနြျောလညျး ခကျြခငျြးပဲခေါငျးငွိမျ့ပွီးပွနျဖွလေိုကျပါတယျ။ ”ကိုယျ ခြို့ကို တကယျခဈြတာပါ။ အတညျလကျထပျယူမှာပါ” လို့ပေါ့။ ပွီးတော့မှ ကနြေျာ့ ခြို့နားအသာလေးတိုးပွီး ခြို့ပခုံးလေးကို တျောတျောကွာကွာသိုငျးဖကျထားမိတယျ။ ပွီးတော့ ကနြျောလညျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလသေံလေးနဲ့ပဲ … ” ခြို… လညျးတဈနကေုနျလြောကျသှားထားတာညောငျးနတေော့မယျ…။ လာ… ဒီမှာအိပျ” ဆိုပွီး ကုတငျပျေါမှာ လှဲခလြိုကျပွီး ကနြေျာ့လကျမောငျးတဈဖကျကို ဘေးမှာခထြားလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့လကျမောငျးပျေါမှာ ခြို ခေါငျးအုံးပွီးအိပျရအောငျပေါ့။ ခြိုလညျး ကနြေျာ့လကျမောငျးပျေါမှာခေါငျးအုံးပွီး အသာလေးလာအိပျတယျ။ ကနြျော ခြို့နဖူးပျေါမှာ ဝဲကနြတေဲ့ ဆံပငျလေးတှကေို အသာသပျတငျပေးရငျး ခြို့နဖူးလေးကိုနမျးလိုကျတယျ။ ခြိုက ခေါငျးလေးအသာစောငျးရငျးကနြေျာ့ဘကျကို အသာလှညျ့ကွညျ့တော့ မကျြလုံးခငျြးဆုံသှားတဲ့ တဈခကျြမှာ ကနြျောမနနေိုငျတော့ဘူး။
ခေါငျးကို အသာငုံ့ရငျး ခြို့ နှုတျခမျးပါးနီနီလေးကို အသာနမျးစုတျလိုကျမိတယျ။ ခြို နဲ့ နမျးရတာ ဘယျတော့မှ နမျးလို့မဝဘူး။ တျောတျောလေးနမျးလို့ကောငျးတယျ။ ကနြျော ခြို့ နို့သီးလုံးလုံးလေးတှကေို အကြီပျေါကနေ အသာခမြေိတော့ခြိုက … ”လူဆိုးလေး အကြီတှကွေကေုနျတော့မယျ။ ပွနျရဦးမယျလေ” တဲ့…။ ခပျညုညုအသံလေးနဲ့ပွောတော့မှ ကနြျောလညျး သတိဝငျလာတော့တယျ။ ”ဆောရီး… ခြို…။ အကြီတှခြှေတျထားရအောငျနျော” ဆိုပွီး ကနြျောလညျး ခြိုခေါငျးအုံးထားတဲ့ ကနြေျာ့လကျမောငျးကို အသာဆှဲထုတျပွီး ထလိုကျတယျ။ တဈဆကျထဲ ကနြျောဝတျထားတဲ့ စပို့ရှပျကိုလညျး ဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ ခြို အိပျနရေငျးနဲ့ ကနြျောအကြီခြှတျတာကိုကွညျ့နတေယျ။ ”ဘာကွညျ့တာလဲ…။
ခြိုလညျး ခြှတျလကှော” ဆိုတော့မှ.. ခြို အိပျနရောကနအေသာထလာတယျ။ ”ကိုခြှတျပေးလေ ” ဆိုပွီး လကျနှဈဘကျကို ဘေးကိုကားပေးတယျ။ ခြိုဝတျထားတာက ခညျြနဲ့လုပျထားတဲ့ မွနျမာဆနျဆနျရငျဖုံးအကြီလေးပါပဲ။ ကနြျောလညျး ရငျခုနျစှာနဲ့ပဲ ခြို့အကြီလေးဆီကို လကျလှမျးပွီး ခြို့ အကြီကွယျသီးလေးတှကေို တဈလုံခငျြးစီဖွုတျပေးမိတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကနြေျာ့လကျတှတေုနျနမေယျဆိုတော့ ကနြျောသခြောပွောရဲတယျ။ ကွယျသီးလေးတှဖွေုတျပွီးတော့ အကြီကို အသာဆှဲခြှတျလိုကျတော့ ခြိုရဲ့ ရငျသားဖှေးဖှေးလေးနှဈမှာက အပွာနုရောငျဘျောလီလေးနဲ့ အတူပျေါလာတယျ။ ခြို့ နို့လေးတှကေအရမျးမကွီးဘူး။
အနတေျောပဲ။ ကနြေျာ့လကျနဲ့ တဈအုပျစာပေါ့။ ဥပမာပေးရမယျ ဆိုရငျ လိမ်မျောသီးခပျလတျလတျတဈလုံးစာလောကျရှိမယျ။ ကနြျော ခြို့နို့သီးလေးနှဈလုံးကို ဆုတျခခြေငျြစိတျကို အသာထိနျးရငျး… ”ခြို … ခဏထဦးနျော… ထဘီပါခြှတျရအောငျဆိုတော့…။” ”အဲဒါတော့ ကို မခြှတျပေးနဲ့…။ ခြိုရှကျတယျ…။ ခြို့ဘာသာခြိုခြှတျမယျ…။ ဟိုဘကျလှညျ့”ဆိုတာနဲ့ သူစိတျကနြေပျအောငျ ကနြျော တခွားဘကျလှညျ့ပေးထားလိုကျတယျ။ ”ရပွီ….။ ဒီဘကျလှညျ့တော့” ဆိုမှ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့….. ဝှား….. ခြိုက ထမိနျတငျမဟုတျဘူး ။ ဘျောလီရော၊ အတှငျးခံပါတဈခါထဲခြှတျထားတာ။ လကျတဈဖကျနဲ့ ရငျဘတျကို အသာယှကျထားရငျး ကနျြတဲ့ လကျတဈဖကျလညျး ပေါငျဂှကွားကိုအုပျထားတယျ။
ကနြျောလညျး ဝတျထားတဲ့ ဂငျြးဘောငျးဘီကို ခပျမွနျမွနျဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ အတှငျးခံပါ တဈခါထဲရောလိပျပွီး ဆှဲခြှတျလိုကျတာလေ။ အောကျက မာနျဖီနတေဲ့ ညီတျောမောငျကတော့ အောကျက တထောငျထောငျနဲ့ပေါ့။ ကနြေျာ့ ကို မကျြလုံးလေးပွူးပွီးကွညျ့နတေဲ့ ခြိုကို ပှခြေီ့ပွီး နှဈယောကျအိပျမှယေ့ာကွီးပျေါကို ပဈခလြိုကျတယျ။ စပရိနျမှယေ့ာဆိုတော့ ခြို့ကိုယျလုံးလေးက အိကနဲ ကသြှားပွီးတော့ ပွနျမွောကျတကျလာတာပေါ့။ ခြိုလညျး ကွောကျအားလနျ့အားနဲ့ မှယေ့ာကို လကျနှဈဘကျနဲ့ထောကျလိုကျတော့ သူအုပျထားတဲ့ ဟာလေးတှေ ပျေါသှားတာပေါ့။ ကနြျောလညျး တဈခါထဲ သူ့ အပျေါဒိုငျပငျထိုးပွီး မှောကျအိပျလိုကျတယျ။ ကနြျော ခြို့ကို အပျေါကနေ မိုးပွီးကွညျ့ရငျး ခြို့နဖူးလေးကို အသာနမျးလိုကျတယျ။
ပွီးတော့ခြို့နှုတျခမျးပါးလေး…။ ခြိုကတော့ ကနြေျာ့ လညျပငျးကို အသာလေးသိုငျးဖကျထားတယျ။ ကနြျော လကျတဈဖကျကို ခြို့ ဘေးမှာထောကျထားရငျး ၊ လကျတဈဖကျနဲ့ ညီတျောမောငျကို အသာထိနျးပွီး ခြို့ ညီမလေးတဈလြှောကျအစုနျအဆနျ ပှတျတိုကျပေးလိုကျတယျ။ တကယျတော့ ခြို ညီမလေးမှာအရညျတှေ ထှကျနပေါပွီ။ ကနြျောကသာ ပထမဆုံးတဈခေါကျဆိုတော့ ကိုယျ့ခဈြသူနာမှာစိုးလို့ လုပျပေးနမေိတာပါ။ ကနြျော အဲလိုပှတျပေးလိုကျတော့ ခြိုလညျး အသကျရှုသံတှမွေနျလာပွီး သူ့တငျပါးလေးကိုကော့ကော့တငျပေးလာတယျ။
သူလညျး မရိုးမရှဖွဈနပွေီဆိုတော့ ကနြျောညီတျောမောငျကို အသာထိုးထညျ့လိုကျတော့မဝငျဘူးဗြာ…။ အပွငျကိုခြျောပွီးထှကျသှားတယျ။ ကနြျောလညျး နောကျတဈခေါကျသခြောတညျ့ပွီး ထိုးထညျ့တော့မှာ ထိပျဖြားလေးဝငျသှားတယျ။ ခြို ကနြေျာ့ကို သိုငျးဖကျထားတဲ့ လကျနှဈဖကျက ကနြေျာ့ရငျဘတျကို ခပျတငျးတငျးတှနျးပွီး… ”မရဘူး…. နာတယျ… နာတယျ” လို့ပွောတော့ ကနြျောလညျး ဇောခြှေးတှပွေနျလာတယျ။ တကယျတော့ ကနြျော အတှမေ့ကွုံမရှိသေးတာလညျးပါတယျ။ ကနြျော တဖွညျးဖွညျးခငျြးနှဲ့သှငျးရငျး တဈခါဖိသှငျးလိုကျတော့ ဖောကျခနဲမွညျပွီး ကနြေျာ့ညီတျောမောငျက ခြို့ ညီမလေးထဲကို ကြှံဝငျသှားတယျ။ တညျးခိုခနျးကလညျး တိတျနတောဆိုတော့ အဲဒီ အပြိုမှေးပါးလေးပေါကျသှားတဲ့ အသံလေးက ကနြေျာ့နားနဲ့ တကယျကိုကွားလိုကျမိတယျ။ ခြို ပါးစပျလေးဟ ပွီး ”အာ့” လို အျောရငျး ခေါငျးလေးမော့လာတယျ။
ကနြျောကတော့ ခြို့နှုတျခမျးကို ခပျမွနျမွနျလေးဖိဖိနမျးရငျး အောကျက ညီတျောမောငျကို အသာလေးငွိမျနပေလေိုကျတယျ။ ခဏလောကျနမှေ ခြို့ တငျပါးလေးတှေ ကော့ကော့တငျပေးလာတာနဲ့ ညီတျောမောငျကို နညျးနညျးခငျြးပွနျဆှဲထုတျလိုကျ သှငျးလိုကျနဲ့ အသှငျးအထုတျလုပျပေးလိုကျတယျ။ တျောတျောလေးကွာတော့ ခြိုလညျးခံနိုငျလာတယျထငျပါတယျ။ ကနြျော အသှငျးအထုတျလုပျတိုငျး အောကျက ကော့ကော့လာတာနဲ့ ကနြျောလညျး ခြို့ နို့သီးလေးခေါငျးနီနီလေးတှကေိုလညျး အသာငုံ့ပွီးစို့ရငျး ခပျမွနျမွနျလေး လုပျလိုကျတယျ။ ခြို့ညီမလေးက တငျးပွီး ကွပျနတောပဲဗြာ..။
ဒါပမေဲ့ ကနြျော တျောတျောနဲ့ မပွီးဘူး။ ကနြျောလညျး စိတျကကွောကျနတောနဲ့ ပွီးတဲ့ဆီကို မရောကျဘူးဖွဈနတော။ ခြိုနာသှားမှာစိုးတဲ့ စိတျနဲ့ ပဲ အသာလုပျနရေငျးက သူကော့ကော့တငျပေးလာလို့ ကနြျောလညျးခပျမွနျမွနျဆောငျ့ပေးမိတာ။ ခြို အသကျရှုသံတှမွေနျလာပွီး ကနြျောကို တငျးတငျးကွပျကွပျဖကျလာတော့ ကနြျော ခပျသှကျသှကျအသှငျးအထုတျလုပျပေးလိုကျတော့ ခြို လကျသီးကို ကဈြကဈြပါအောငျဆုတျရငျး ငွိမျကသြှားတယျ။ အဲတော့မှ ကနြျောလညျး ခြိုသာပွီးသှားတယျ ကနြျောမပွီးသေးပါလားဆိုပွီး စိတျကို ညီတျောမောငျမှာထားပွီး လုပျလိုကျတယျ။ ခြိုကတော့ မကျြလုံးလေးမှိတျပွီးငွိမျသှားပွီ။
ကနြေျာ့ကို ဖကျထားတဲ့လကျတော့ကိုတော့ မလှတျသေးဘူး။ ကနြျော စိတျကိုသှငျးပွီးဆောငျ့လိုကျတော့ မကွာပါဘူး။ ခြို့ ညီမလေးက အရမျးကွပျတာနဲ့ပဲ ခဏလေးနဲ့ပွီးသှားတယျ။ တဈပတျလောကျအောငျးထားတဲ့ အရညျတှကေ ခြို့ အသဈစကျစကျအဖုတျလေးထဲမှာအပွညျ့ပဲ။ အပွငျကိုတောငျလြှံကလြာတယျ။ ကနြျောလေး ခြို့ဘေးမှာ အသာလှဲခရြငျး ခြို့ကို ကနြေျာ့ဘကျဆှဲလှညျ့ပွီး ရငျခှငျထဲမှာ ခပျတငျးတငျးဖကျထားလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ အသကျနဲ့ တမြှခဈြရတဲ့ ကောငျမလေး…၊ ကနြျောနဲ့ အရငျးနှီးဆုံးအခွအေနထေိရောကျသှားခဲ့လို့လေ။
”ခဈြတယျ….. ခြိုရယျ…..။” ကနြျော သူ့ကို တိုးတိုးလေးပွောရငျး ခြို့နဖူးမှာကပျနတေဲ့ ခြှေးစလေးတှကေို တယုတယသုတျပေးမိတယျ။ ”ခြို….. နာနလေား…။” ကနြျောမေးတော့… ”ပထမဝငျတုနျးကတော့ တျောတျောနာတယျ….။ နောကျကတြောမနာတော့ဘူး … ”တဲ့။ ဒါဆို ကောငျးရော ကောငျးရဲ့လား ဆိုတော့ ”အငျး…. အရမျးကောငျးတယျ” လို့ပွနျဖွတေယျ။ တကယျတော့ ခြိုရော ကနြျောရော ကံကောငျးတယျလို့ပွောရမယျ။ ကနြျော တျောတျောနဲ့ မပွီးသှားတာက ခြို့ကို ပထမဆုံးဆကျဆံတဲ့အခြိနျမှာ အပြိုမှေးလေးပေါကျလို့ နာယုံမဟုတျပဲ တျောတျောလေးကောငျးအောငျလုပျပေးနိုငျခဲ့လို့လေ။ ကနြျော ခြို့ကို ရငျခှငျထဲမှာ အတျောကွာအောငျဖကျထားပွီး ခြို့မကျြနှာလေးကို ကွညျ့နမေိတယျ။
ခြိုကတော့ မကျြလုံးလေး မှိတျပွီး မှိနျးနတေယျ။ သူလဲ တျောတျောပငျပနျးသှားပုံပါပဲ။ နာရီဝကျလောကျမှိနျးနကွေပွီးတော့မှ နှဈယောကျသား သနျ့ရှငျးရေးလုပျ၊ အဝတျအစားတှပွေနျဝတျပွီး ပွနျထှကျလာခဲ့တယျ။ ဟိုတယျက ပွနျအထှကျ ခြိုလမျးလြောကျတာ ကှတကှတဖွဈနလေို့ ကနြျောတောငျစမိသေးတယျ။ ခြိုကတော့ မကျြစောငျးထိုးပွီးတော့ကနြေျာ့ ကြောပွငျကို မနာအောငျထုတာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ခြို့ကို ပွနျပို့ခါနီး ဆေးဆိုငျဝငျပွီး တားဆေးလိုကျမိသေးတယျ။ တဈလုံးကို ခကျြခငျြးတိုကျပွီး နောကျတဈလုံးကို တော့ အိမျပွနျရောကျမှသောကျဖို့ပေးလိုကျတယျ။ လကျမထပျခငျ မဖွဈသငျ့တာတှမေဖွဈရအောငျ ကွိုတငျကာကှယျရမယျမဟုတျလား။ ကနြျောတို့ နှဈယောကျလုံး ပညာကိုဆုံးခနျးတိုငျအောငျသငျရသေးတာမဟုတျတော့ လှနျလှနျကြူးကြူးမဖွဈသငျ့သေးဘူးလေ။
ဒီတဈခေါကျ ကနြျော အိမျပွနျလာတော့ ခြို့ကို ပိုပွီးလှမျးလာတယျ။ ခြိုနဲ့ ကနြျောလညျး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျပိုပွီး ခဈြလာသလိုပဲ။ အဲလိုနဲ့ အစရှိသှားတော့ ကနြျော ခြို့ဆီရောကျတိုငျး ဟိုတယျခနျးထဲမှာပဲအခြိနျဖွုနျးဖွဈတာမြားတယျ။ ဟိုဟာလုပျတော့လညျး ပထမစလုပျတုနျးကလို ရိုးရိုးမဟုတျဘူး၊ ပုံစံအစုံပဲ၊ ပကျလကျ၊ မှောကျရကျ၊ လေးဘကျ ၊ မတျတပျ …..ပွီး။
တစ်နေ့ … ကျနော် ပထမနှစ်ကျောင်းပိတ်တုန်းကပေါ့။ ဧပြီလနွေရာသီကျောင်းပိတ်တော့ အိမ်ကအဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ ကျနော်ရယ် သုံးယောက်သား ကားလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကိုသွားလည်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့နေတာက မန္တလေးဆိုတော့ ပြင်ဦးလွင်နဲ့ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေကုန်ဟိုသွားဒီသွားလျောက်သွားကြမယ်ပေါ့။ မရောက်တာကြာတာလဲပါတာပေါ့။ မနက်စောစော မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကိုဝင်ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲ။ ဘုရားဖူးနေရင်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တာ..။ ကျနော်နဲ့ ရွယ်တူလောက်တော့ရှိမယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဆံပင်လေးမတိုမရှည်နဲ့ အသားဖွေးဖွေး၊ လူကောင်သေးသေးလေး၊ နှာခေါင်းလေးက ချွန်ချွန်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက နီနီလေး။ အဲဒီတော့ အီဖေကိုယ်လဲ ဘုရားဖူးပြီးတာနဲ့ နှစ်ယောက်ကျော်လောက်က ကောင်မလေးကို ခဏခဏလှမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။
သူလဲ သူ့အဖေအမေတို့နဲ့လာတယ်ထင်တာပဲ။ သူနဲ့ပါလာတဲ့မိန်းမကြီးက သူနဲ့ရုပ်ချင်းခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။ သူနဲ့ ပါလာတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ ဘွားတော်ကြီးက ဘုရားရှစ်ခိုးတာ တော်တော်နဲ့မပြီးဘူး။ သူလေးကတော့ ဘုရားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ ဟိုဟိုဒီကြည့်ရင်းကျနော်နဲ့ အကြည့်ချင်းသွားဆုံဖြစ်တယ်။ သူလည်းကျနော့်ကို ခဏလောက်ကြောင်ပြီးကြည့်နေသေးတယ်။ နောက်တော့မှ ချက်ချင်းပဲဟိုဘက်ပြန်လှည့်သွားတယ်။ ကျနော်လည်း အမေတို့မပြန်မချင်းကောင်မလေးကို ခဏခဏကြည့်ကြည့်နေမိတယ်။ ဘာလို့လဲမသိဘူး။ အဲဒီကောင်မလေးကို ကျွန်တော်အရမ်းချစ်မိသွားသလိုပဲ။
မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်ဆိုတာ အဲဒီလိုမျိုးကိုခေါ်တာလားမသိဘူးနော်…။ နောက်တော့ အဖေတို့လည်း ဘုရားဖူးလို့ပြီးတော့ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတစ်ပတ်ပတ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ သူလေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့သေးတယ်။ သူ့မျက်နှာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲက ဒိန်းကနဲ ၊ ဒိန်းကနဲခုန်ခုန်လာတယ်…။ အင်း ခက်တော့ခက်နေပြီကောင်မလေးရယ်…။ နောက်လည်း ဆုံရဖို့မလွယ်ဘူး။ အဲလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ဘုရားက ပြန်တော့ ပွဲကောက်ရေတံခွန်ဝင်တယ်။ ပွဲကောက်မှာများတွေ့ဦးမလားဆိုပြီး ကျနော် ဟိုဟိုဒီဒီရှာကြည့်မိသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကံတရားက ကျနော့်ဘက်မှာမရှိဘူးဗျာ…။ ဖြူဖြူသေးသေးကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ ပွဲကောက်ရေတံခွန်က ပြန်တော့ ပိတ်ချင်းမြောင်ကိုသွားတယ်…။ ပိတ်ချင်းမြောင်က လှိုင်ဂူကြီးဆိုတော့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ ကျနော့်အမေထဲ အထဲထိမဝင်ဘူး။ အထဲမှာအသက်ရှုကျပ်တယ်လေ။ အမေမဝင်ဘူးဆိုတော့ ကျနော့်အဖေလည်း အပြင်မှာစောင့်နေခဲ့တယ်ပေါ့… ဟဲဟဲ…. ဒါက သဘာဝပဲလေ…။ သား… အထဲသွားချင်ရင်သွားလေ ဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း အထဲကို ဝင်ဖြစ်တယ်။ ကျနော် အထဲကိုသာသွားနေတာ။ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး..။ အဲ… ဘာမှမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ မနက်က မင်းသမီးလေးအကြောင်းပဲ ကျွန်တော်တွေးမိနေတာ..။ ကျနော်နဲ့ ဘယ်လိုမှမဆုံနိုင်တဲ့ ဘဝမဟုတ်ပါလား။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူလေးကို ကျနော် တော်တော်လေးချစ်မိနေပြီပဲဆိုတာပေါ့။ သူ့မျက်နှာလေးမြင်ပြီးကတည်းက ဘာကိုပဲကြည့်ကြည့် သူ့မျက်နှာလေးပဲမြင်မြင်နေတာလေ။
ပိတ်ချင်းမြောင်ဂူအဆုံးထိလျှောက်ပြီးသွားတော့ ဘုရားဖူးမယ်ဆိုပြီး အစွန်နားလေးမှာထိုင်လိုက်တယ်။ ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ ဘုရားမှာဆုတောင်းမိတယ်။ မနက်က ကောင်မလေးနဲ့ ပြန်ပြီးဆုံတွေ့ရပါစေသားပေါ့။ ဆုတောင်းပြီးလို့ မျက်လုံးလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ရော…. ကျနော့်ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားပြန်တယ်…။ ကျနော့်မျက်လုံးထောင့်စွန်းမှာ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ သူလေးကို ဖျတ်ခနဲတွေ့လိုက်မိလို့…။ ကောင်မလေးရဲ့ ဘေးနားကို တစ်ချက်ကြည့်တော့ မနက်က ဘိုးတော်ကြီးတို့ပါမလာဘူး။ ကြည့်ရတာ သူလည်း ကျနော့်လိုပဲထင်တယ်။ တစ်ယောက်ထဲအပေါ်တက်လာတာ။
ဆံပင်လေးကို ဖြောင့်စင်းပြီး ရွှေရောင်ဆံပင်လေးဆိုထားနဲ့ ပုံလေးကို ကျနော်နောက်ကနေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိတယ်။ ဒီလိုအချိန်လေးတွေမကုန်ဆုံးပါရစေနဲ့…။ ခဏလောက်ကြာတော့ သူ ကျနော့်ဘက်ကို ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ သူ့ကို ရယ်ပြလိုက်တယ်။ သူလည်းကျနော့်ကိုပြန်ပြီးရယ်ပြတယ်ထင်တာပဲ။ ရင်တွေခုန်လွန်းလို့ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတော့တာ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာထိုင်နေတဲ့အတွဲက ထထွက်သွားတယ်။ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ ကျနော်နဲ့ ကောင်မလေးကြားထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။
ကျနော်လည်း ဖင်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးသူ့နားကို အသာလေးတိုးသွားလိုက်တယ်။ ”ဘုရားလာဖူးတာလား…။” သူ လှည့်ကြည့်တယ်။ ဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူး။ ”မနက်ကလည်းတွေ့တယ်နော်။ ပြင်ဦးလွင်ကိုလာလည်တာလား။” ကျနော် တည်တည်တံ့တံ့ပဲ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာမျိုးနဲ့ ပြောလိုက်မိတယ်။ သူ့ကို နှောက်ယှက်တဲ့ တေလေဂျပိုးလို့ မထင်စေချင်ဘူးလေ။ ”အကောင်းနဲ့မေးတာပါ။ ခရီးသွားတဲ့လူချင်းအတူတူဆိုတော့လေ…။ ကိုယ်က မန်းလေးကလာတာ။ ဒီကိုမရောက်တာကြာလို့..။” ”ချိုက ပြင်ဦးလွင်မှာပဲနေတာ..။ မြင်းခြံက အဒေါ်လာလို့ လိုက်ပို့တာ…။” သူလေးဆီက ဘယ်လိုမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ နာမည်လေးကိုပါတစ်ခါထဲသိလိုက်ရတယ်…. ချိုတဲ့….။
သူလေးနဲ့ တွေ့ရတာ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်း ချိုမြသွားတာပါပဲ ကောင်မလေးရယ်…။ ”မပြန်သေးဘူးလား။ အောက်မှာ အဒေါ်တွေစောင့်နေတယ်မဟုတ်လား။ ”ကျနော် စကားမရှိစကားရှာပြီးလျှောက်ပြောဖြစ်တယ်။ ”အင်း….။ ပြန်တော့မှာ…။ချို ဒီသရက်ပင်ကြီးကိုတွေ့တိုင်း သရက်သီးတွေခူးခူးစားချင်လို့ ကြည့်နေတာ…။” ”အာ…. ချိုကလည်း ဒါက သရက်ပင်အတုကြီးဟာကို ဘယ်လိုလုပ်သရက်သီးခူးစားလို့ရမှာလဲ…။” သူကလည်း ချိုဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း ကောက်ပြီးချိုပလိုက်တယ်…. မှတ်ကရော…။ ”ဟီး… ဟုတ်တယ်နော်…. သရက်ပင်အတုကြီးပဲဥစ္စာ။” ကျနော့်ကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေးကြည့်ရင်း ရယ်ပြီးပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ချို့ကို ပြန်ပြီးရယ်ပြဖြစ်တယ်ထင်တာပဲ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာသိလိုက်တာတော့ ကျနော်နဲ့ ချို ခင်သွားပြီဆိုတာပဲ။
”တူတူပြန်ဆင်းရအောင်လေ…။” ကျနော့်သူ့ကို ပြန်ဖို့ပြောတော့ သူလဲ အင်း ဆိုပြီး ထလာတယ်။ ပိတ်ချင်းမြောင်ဂူထဲက ပြန်အထွက်မှာ ကျောက်နံရံကြားကထွက်လာတဲ့ရေတွေကို လက်နဲ့လိုက်လိုက်ဆော့နေလို့ ကျနော့် မှာ ချို ဓာတ်လိုက်မှာစိုးလို့ မနည်းလိုက်ဆွဲရတယ်။ သူကတော့ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ တကယ့်ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲ…။ ဂူအပြင်နားရောက်ခါနီးမှာ နှစ်ယောက်လုံး မတိုင်ပင်ပဲနဲ့ အလိုက်တသိလမ်းခွဲပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြင်ဦးလွင်က အပြန်လမ်းမှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ချိုဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ကပ်ပြီးတော့ပါလာပြီ။ ကျနော် အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူ့ကို သတိရလွန်းလို့ ဖုန်းဆက်မလို့ စဉ်းစားသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ နဲ့မတွေ့မှာစိုးလို့ သူပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို မဆက်ဖြစ်ဘူး။ တကယ်တော့ ကျနော်ကသာကြောက်နေတာပါ။ သူပေးထားတာ သူကိုင်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ ဘယ်သူနဲ့မှတွေ့စရာမရှိပါဘူး။ ညရောက်မှ ဆက်တော့မယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် အောင့်ထားလိုက်တယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ညရောက်ဖို့ တော်တော်လေးကြာတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ အဲလိုနဲ့ ညရောက်တော့ ကျွန်တော် ချို့ဆီကို ဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ်။ ”ဟိတ်…. ဘယ်သူလဲ သိလား…။” ” သိတယ်….။ နေ့လည်က ပိတ်ချင်းမြောင်မှာတွေ့တဲ့ တစ်ယောက်မဟုတ်လား။” ”အင်း.. ဟုတ်တယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။” ”ဒီလိုပဲပေါ့…။” စကားဆုံးတော့ သူမ ဆီက ရယ်သံလွင်လွင်လေးကိုကြားရတယ်။ ”ကိုယ် ဖုန်းဆက်မှာကို မျှော်နေတာမဟုတ်လား…” လို့ ကျနော်စတော့.. ”မမျှော်ပါဘူး။
ဘာလို့ မျှော်ရမှာလဲ…။ နေ့လည်က လူကို ခဏခဏငမ်းကြောထနေတဲ့ တစ်ယောက်က ဖုန်းနံပါတ်တောင်းသွားတော့ သူပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသိတာပေါ့။ ပြီးတော့ ချို့ဆီကို လာတဲ့ဖုန်းမှများများစားစားမရှိတာ။” ”ဟုတ်လား….။ ချို့ဆီကို ကောင်လေးတွေဖုန်းမဆက်ဘူးလား။” ”မဆက်ပါဘူး။ ချိုကမှပြန်မပြောတာ။ မသိရင်လုံးဝမကိုင်ဘူး။” ”အခု ကိုယ့်ဖုန်းကျတော့ရော….။” ”အဲဒါက သူ ဆက်တဲ့ဖုန်းမှန်း ချို့ စိတ်ထဲမှာသိနေလို့ကိုင်လိုက်တာ…။” ”ဒါဆို ချိုက ကိုယ့်ကို ခင်တယ်ပေါ့။” ”အင်း…. ။ ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး။ သူ့ကိုလေ… ချို မြင်မြင်ချင်း ခင်မိသလိုခံစားရလို့…။” ”ဘယ်က ‘သူ’ လဲ…။” ”အခု ဟိုဘက်က ဖုန်းနေတဲ့သူ ပေါ့။” ”အော်…..။
ဟုတ်သားပဲ။ ချိုက ကိုယ့်နာမည်မှမသိသေးတာ…။ ကိုယ့်နာမည်က ကျော်သူစိုးတဲ့…။” ”ဟုတ်လား…။ ငယ်ငယ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ထင်တယ်…။ နာမည်က ကျော်သူဆိုး ဆိုတော့…။” ”အာ… ကွာာာ…. မဟုတ်ပါဝူး…။ ကျော်သူဆိုးမဟုတ်ဘူး….။ ကျော်သူစိုး…။” ”ဟုတ်ပါပြီ… ကျော်သူစိုးဆိုတော့လည်း ကျော်သူစိုးပေါ့။ ခစ်ခစ် ” အဲလိုနဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာပဲ သူမနဲ့ ကျနော် စပြီး ခင်မင်မှုရခဲ့တယ်။ ဧပြီလကျောင်းပိတ်ရက် တစ်လလုံး သူမနဲ့ညတိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော့်မိသားစုအကြောင်း ၊ သူမရဲ့ မိသားစုအကြောင်းပေါ့။ ချိုနဲ့ မနက်ပိုင်းတော့ ဖုန်းမပြောဖြစ်ဘူး။ သူ့ အိမ်က ဆွယ်တာဆိုင်ဆိုတော့ တစ်နေကုန် ဆိုင်မှာကူထိုင်ပေးရတယ်။ တစ်ခါတလေ ဆိုင်မှာလူရှင်းရင်တော့ လူဆိုးလေး… ဘာလုပ်နေလဲ ဘာညာနဲ့ message တွေပို့တယ်။ ကျနော်က သူ့ကို ချိုလို့ပဲခေါ်ပေမဲ့ သူကတော့ ကျွန်တော့် နာမည်မှာ စိုး ပါတာနဲ့ လူဆိုးလေးဆိုပြီး ခေါ်တယ်။ တကယ်တော့ ဘာမှလဲ မဆိုင်ပါဘူးနော့်…။ အဲလိုနဲ့ ဧပြီလကုန်လို့ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းပြန်တက်ရတယ်။ ကျနော်က မန်းလေးမှာပဲ ကျောင်းတက်တယ်လေ။ သူကတော့ ပြင်ဦးလွင်တက္ကသိုလ်မှာပဲ BC Major တက်တယ်။ ကျနော် ချို့ကို မေးကြည့်ဖူးတယ်။ ”ချိုကဒီလောက်ချောတာ မေဂျာကွင်းမရဘူးလား”လို့ပေါ့။
သူမ ရီပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။ ”ချိုက သူများတွေကို အယ်စတုံကြီးတွေမှမဟုတ်တာ…။ ဘယ်လိုလုပ်ကွင်းရမှာလဲ”တဲ့။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်။ ချိုက ပိန်ပိန်ပါးပါးလေး။ အရပ်က ငါးပေနှစ်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ပုမှာပေါ့။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အတော်လောက်ပါပဲ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာလည်း ပိန်ပြီး အရမ်းအရပ်ရှည်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကလန်ကလားနဲ့ ကြည့်မရဘူး။ ကျောင်းဖွင့်ပြီးပြီးချင်းပဲ ချို့ကို ကျွန်တော် ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ စာတွေကလည်းများတာနဲ့ စိတ်ညစ်ပြီး ဖွင့်ပြောလိုက်တာ…။ အဲလိုနဲ့ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီး နှစ်လလောက်ကြာတော့ ချို့ဆီက အဖြေပြန်ရတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အဖြေရတဲ့နေ့က သူမမွေးနေ့။ ချိုက ကျနော့်ထက်တော့ နှစ်လကျော်ကျော်လောက်ငယ်တယ်။
လူ့ သဘာဝဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်သားနော်..။ ညတိုင်းဖုန်းပြောရုံနဲ့လည်း မတင်းတိမ်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ သူနဲ့လာတွေ့လို့ရမလားဆိုတော့.. ချိုကလည်း ”ကျောင်းဖွင့်ရက် တစ်ရက်လာချင်တွေ့လေ” တဲ့…။ တကယ်တော့ ချိုတို့အိမ်ကအရမ်းစည်းကမ်းကြီးတယ်ဗျ…။ ဒီအရွယ်ကြီးရောက်တဲ့အထိ ချို ကို သူ့အဖေက ကားနဲ့ အပို့အကြိုလုပ်တုန်းပဲ…။ ကျောင်းဖွင့်ရက် လာတွေ့ခိုင်းတာက သူ့အိမ်က လိုက်ပို့ပြီးရင် ကျောင်းတက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးမှ ကျနော်နဲ့ အပြင်ထွက်လည်မလို့လေ..။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ကမန်းကတန်း ဗိုလ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကမန်းကတန်းအပူကပ်ပြီး စုံစမ်းရတယ်။
ပြင်ဦးလွင်က အတွဲတွေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရယ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံရယ်၊ ပြီးတော့…. ဟီးဟီး…. ပိတ်သတ်ကြီးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ ပြီးတော့ နေ့လည်ပိုင်း လျောက်လည်ဖို့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလည်းငှားရတာပေါ့ဗျာ…။ အဲဒါကတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကျေးဇူးနဲ့ မြို့ခံသူ့သူငယ်ချင်းဆီကပဲ ဟွန်ဒါဆိုင်ကယ်အကောင်းစားတစ်စီးကို အလကားငှားလို့ရလိုက်တယ်…။ အဲ…. ကိုယ်ကတော့ ဆီထည့်ပေးရတာပေါ့နော်..။ ပထမတစ်ခေါက်သွားတွေ့တုန်းကတော့ လက်လေးကိုင်၊ သူကလည်း ဆိုင်ကယ်စီးရင် ကျနော့်ခါးလေးဖက်စီးပေါ့။ အအေးဆိုင်ထိုင်တော့လည်း လူလစ်ရင် ချို့ပါးလေးကို ခိုးခိုးနမ်းပေါ့။ သူမကတော့ ကျနော်နမ်းလိုက်တိုင်း ပါးပြင်ဖြူဖြူနုနုလေးမှာ ပန်းရောင်လေးတွေဖြာနေတာပဲ…။ ကျနော် တအားဖိနမ်းလို့ ဖြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော် ပိတ်သတ်ကြီး…။
ကျနော်နမ်းတာဖွဖွလေး၊ သူ့ဘာသာသူ အနမ်းမခံဖူးလို့ ရှက်သွေးဖြာတာ..။ ပထမတစ်ခေါက်တော့ လက်လေးကိုင်လိုက်၊ ပါးလေးနမ်းလိုက်နဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်။ အချိန်ကလည်းသိပ်မရဘူးမဟုတ်လား။ အပြင်မှာ စတွေ့တွေ့ချင်းဆိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးပြောစရာစကားတွေများလွန်းတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွတ်ထိုးနေလိုက်တာ မပြီးနိုင်ဘူး….။ ပြန်ခါနီးအချိန်ရောက်တော့မှပဲ မခွဲချင်ခွဲချင်နဲ့ သူတို့ကျောင်းဝင်းထဲကို လိုက်ပို့လိုက်ရတယ်။ နောက်ထပ်တွေ့ဖြစ်တော့ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ချင်တယ်ကွာဆိုပြီး ရုပ်ရှင်တူတူသွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်သာပြောတာပါ.. တကယ်တန်းကျတော့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ဘာကားပြမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ ဘာကားမှန်းမပြောနဲ့ မင်းသားမင်းသမီးဘယ်သူဆိုတာတောင် အသံကြားလို့ပဲ သိတာ…။
ပိတ်ကားကို ကြည့်လို့သိတာမဟုတ်ဘူး။ ချို့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို အမြဲနမ်းနေတာ။ နမ်းလိုက်တိုင်းလည်း နမ်းလို့မဝဘူး။ နွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုချိုအီအီလေး… ၊ တကယ်ပဲ နာမည်နဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အလယ်လောက်ရောက်တော့ ကျနော့်လက်က တဖြည်းဖြည်းနယ်ချဲ့လာတယ်။ ချို့ နို့လုံးလုံးလေးတွေကို အကျီပေါ်နေအုပ်ကိုင်ပြီးပွတ်တာပေါ့။ ချိုလည်းနမ်းရင်းနဲ့ စိတ်ပါလာလို့ထင်တယ်။ ကျနော် သူ့နို့လေးတွေကို ပွတ်ပေးတာကိုဘာမှမပြောဘူး။ သူကဘာမှမပြောတာနဲ့ ကျနော်လည်း အကျီအောက်နေလက်ကို အသာလေးလျိုပြီး သူ့နို့လေးတွေကို ကိုင်လိုက်တယ်။
ချိုဝတ်ထားတဲ့ အကျီက တီရှပ်အပျော့သားဆိုတော့ ကောင်းကောင်းလက်လျိုသွင်းလို့ရတယ်။ ဘော်လီကလည်း အပျော့သားခပ်သေးသေးလေးဆိုတောဘော်လီကို အသာလေးအောက်ကို ဆွဲချပြီး အဖုံးအကာမရှိတဲ့ နို့အိအိလေးတွေကို စမ်းမိတယ်။ နို့လေးတွေက လိမ္မော်သီးခပ်လတ်လတ်အရွယ်လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက သေးသေးလေးတွေ။ ရုပ်ရှင်ရုံအမှောင်ထဲမှာဆိုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဘာရောင်လဲဆိုတာတော့မမြင်ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ပန်းရောင်လေးတွေပဲဖြစ်မှာပါ။ အပေါ်ပိုင်းကို နယ်ချဲ့လို့ တော်တော်လေးကြာတော့ အောက်ပိုင်းကို နယ်ချဲ့ဖို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ ချိုဝတ်ထားတာက ထမိန်စကတ် ၊ ထမိန်စကတ်ဝတ်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိမှာပါ… (အဲ မှားကုန်ပြီ ကျနော်ဝတ်ဖူးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်) ထမိန်စကတ်ဝတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ တွေ့ဖူးရင်တော့သိကြမှာပါ။
ထမိန်စကတ်က တစ်ကွင်းလုံးချွတ်စရာမလိုဘူးဗျ၊ ခါးမှာချိတ်ထားတဲ့ချိတ်ကိုလည်း ဖြုတ်စရာမလိုဘူး။ ထပ်ထားတဲ့ထမိန်နှစ်လွှာကြားကို အသာလေးလက်လျိုသွင်းလိုက်၊ ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ကျနော်လည်း မပြောတတ်တော့ဝူးဗျာ..၊ ထမိန်မှာ သုံးလွှာ တို့ လေးလွှာတို့ ချုပ်ဝတ်ကြတာသိတယ်မလား၊ မသိရင်လည်းထားလိုက်တော့၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ…။ အင်း… လက်ကို ထမိန်အလွှာနှစ်ခုကြားထဲအသာလေးလျိုသွင်းလိုက်၊ ဆီးစပ်နားလေးမှာ V shape အခွဲလေးရှိတယ်ဗျ…၊ လက်ကအရမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် အသာလေးလျိုသွင်းလိုက်ရင် အဖုတ်လေးနဲ့ကွက်တိပဲ။ အတွင်းခံဝတ်ထားရင်တော့ ရွှေကြုတ်လေးနဲ့ တိုက်ရိုက်မတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာ..၊ ညီမလေးပေါ်က ပင်တီလေးကိုပဲစမ်းမိမှာပေါ့။ ပြောရင်းနဲ့ ချော်ကုန်ပြီ။ အဲလိုနဲ့ ကျနော်လည်း ချိုရဲ့ ထမိန်စကတ်လေးထဲကို အလိုက်သင့်လေးလက်ကိုထိုးသွင်းလိုက်တော့ ချို့အဖုတ်လေးကိုစမ်းမိတယ်ဗျာ၊ ပင်တီပေါ်ကပေါ့။
အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက နုပြီးအိနေတာပဲ။ တော်တော်ကို ကောင်းတဲ့အထိအတွေ့ပါ။ ခင်ဗျားတို့ကို မြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် ပူစီ ဘိတ်ကရီကထုတ်တဲ့ ကြက်ဥကိတ်မုန့်လေးကို စမ်းမိသလိုပဲ။ နောက်ပိုင်း ကျနော် ပူစီ ကြက်ဥကိတ်မုန့်စားရင်တောင် ဒီကိတ်မုန့် က နာမည်နဲ့လဲလိုက်ပါတယ်လို့တောင် တွေးမိသေးတယ်။ ( ပူစီမုန့်တိုက်ပိုင်ရှင်သိရင် ကျနော့်ကိုတရားလာစွဲနေဦးမယ်… ခွိ… ) ချိုရဲ့ ညီမလေးက အရည်တွေတော်တော်ထွက်နေပြီဗျ။ ပင်တီလေးမှာဆို ရွှဲနစ်နေတာပဲ။ ကျနော်လည်း လက်လေးနဲ့ အသာဖိဖိပြီးပွတ်ပေးတာပေါ့။ တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း ညီမလေးအထဲကို လက်တစ်ဆစ်လောက်ထည့်ထည့်ပြီး မွှေပေးတယ်။ အထဲကိုတော့ အများကြီးထိုးမထည့်ပါဘူး။ အမှေးလေးရှိသေးရင် ညီတော်မောင်အတွက်ချန်ထားမလို့လေ။
ချိုနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုတ်ရင်း လက်တစ်ဘက်က နို့လုံးလုံးလေးတွေကို ချေ၊ နောက်လက်တစ်ဖက်က ရွှေကြုတ်လေးကို မွှေလိုက်တာ၊ တအောင့်လောက်ကြာတော့ ချိုလည်း တရှုးရှုးဖြစ်လာပြီး အနမ်းတွေကြမ်းလာတော့တာပဲ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျနော့်ခေါင်းကိုတင်းတင်းဆုတ်ရင်း နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနမ်းလာတာ။ ကျနော်လည်း ချိုပြီးတော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိတာနဲ့ အောက်ကိုနယ်ချဲ့ထားတဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ခပ်သွက်သွက်လေးလှုပ်ရှားပေးလိုက်တော့ အသာလေးကားပေးထားတဲ့ ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းက ရုတ်တရက်စိသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်ပြီး တစ်ခါပြီးသွားတယ်ဗျာ…။ သူ့ နှုတ်ခမ်းကတော့ ကျနော့် နှုတ်ခမ်းနဲ့ မခွာသေးဘူး၊ တပ်ရက်ပဲ။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့နမ်းနေတာပေါ့။ တစ်ချက်တစ်ချက်ဆို အသံပါထွက်တယ်။
တော်သေးတယ် ၊ ရုပ်ရှင်က အသားကုန် ရန်ဖြစ်နေတဲ့ကားမို့လို့သာပဲ။ နို့မို့ဆိုရင် ကျနော်တို့နမ်းတဲ့အသံတွေ ဘေးခုံကကြားသွားလောက်တယ်။ ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ ရုံထဲကနေ လူတွေအကုန်ကုန်မှ ထွက်ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချို့ထမိန်အောက်မှာ ကွက်နေလို့၊ ကွက်နေတာမှ အကြီးကြီးကွက်နေတာ၊ ဝတ်ထားတဲ့ထမိန်ကလည်း အနက်ရောင်မဟုတ်တော့ မြင်ရတယ်လေ၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပဲ။ ကျနော်အပေါ်က ထပ်ဝတ်ထားတဲ့ အပေါ်အကျီကိုချွတ်ပေးပြီး ချို့ကို ခါးမှာစည်းခိုင်းထားလိုက်ရတယ်။ နို့မို့ရင်မလွယ်ဘူး။ အရှက်တွေကွဲကုန်မှာ။
အခု အပေါ်ကအကျီထပ်စည်းထားတာလည်း သိကြမှာပါပဲ။ ကျနော်နဲ့ ချိုလည်း ခေါင်းလေးအသာငုံ့ပြီးထွက်လာကြတာဆိုတော့ တခြားသူတွေဘယ်လိုနေမလဲ မသိလိုက်ဘူး။ ချိုကတော့ အသားဖြူတဲ့သူဆိုတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲနေတာပဲ။ သူလည်းရှက်မှာပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်ပြင်ဦးလွင်သွားတာ ချိုနဲ့တော်တော်လေးခရီးရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နို့ကိုင်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ ညီမလေးကိုပါ နယ်ချဲ့လိုက်တာမဟုတ်လား။ အဆုံးစွန်အထိလုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ နှစ်ယောက်လုံးကလက်ထပ်ဖို့အထိ စိတ်ကူးထားကြတာဆိုတော့ မင်္ဂလာဦးညမှာရင်ခုန်ဖို့ ချန်ထားဦးမှ လို့ တွေးမိလို့လေ။
ကျနော်လည်း ချိုရှိတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကို ခဏခဏသွားဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ထိသွားဖြစ်လဲဆိုရင် တစ်လထဲကိုခြောက်ခေါက်လောက်ကျမယ်ထင်တာပဲ။ ပြင်ဦးလွင်ကလည်း လည်စရာတွေအပေါသားဆိုတော့ ဘုရားတွေလျှောက်ဖူး၊ အတွဲတွေအေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရတဲ့ အအေးဆိုင်လေးတွေမှာထိုင်၊ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့။ ရုပ်ရှင်ကတော့အခေါက်တိုင်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အချိန်ကုန်တယ်ဗျ။ ကျနော်သူနဲ့လည်လို့ရတဲ့အချိန်က ကျောင်းတက်ချိန်လေးပဲဆိုတော့သိပ်မများဘူးလေ။ ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံကလည်း ခပ်သေးသေးဆိုတော့ ရုပ်ရှင် တစ်ကားနဲ့ တစ်ကားကတော်တော်နဲ့ချိန်းတာမဟုတ်ဘူး။ တော်ကြာတစ်ကားထဲကို နှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်ရုံကလူတွေဟားမှာကြောက်တာလည်းပါတာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီးတာ နှစ်လလောက်ကြာတော့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း သွားသွားနမ်းတာပေါ့။ ကျနော် ဒီတစ်ခေါက်မတိုင်ခင်မရောက်ဖြစ်တာ တစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတော့ လူကလည်းတော်တော်လေး ကြွနေတာ။ သူလည်း အဲလိုပဲထင်တာပဲ။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နမ်းရင်းပြုရင်းနဲ့ စိတ်ကမထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော့် ညီတော်မောင်ကို ဘောင်းဘီထဲက အသာထုတ်ပြီး ချို့ကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြောသာပြောတာ။ ကျနော့် ညီလေးကို သူတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ကျနော်ကသာ လက်သရမ်းပြီး သူ့ကို လိုက်ကိုင်နေတာ။ သူလည်း ကျနော့် ညီလေးကိုကိုင်ရင်း လူက တစ်ရှုးရှုးဖြစ်လာတယ်။
ကျနော့် မျက်နှာကို လာလာထိတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်တွေက အတော်လေးမြန်လာတယ်လေ။ ကျနော် ချို့ကို တစ်ခါပြီးသွားအောင်လက်နဲ့ပဲလုပ်ပေးပြီးတော့ ချိုက ကျနော့်ကိုတိုးတိုးလေးညီးတယ်။ ”လူဆိုးလေး…. အရမ်းချစ်တယ်ကွာ…။ အတူတူနေချင်ပြီတဲ့….။” တကယ်တော့သူပြောတဲ့အတူတူနေချင်ပြီဆိုတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီး အတူတူနေချင်တာကိုပြောတာနေမှာပါ။ ကျနော်လည်း ပထမလက်ထပ်တဲ့အထိစောင့်ထိန်းမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမဲ့ ချို့ရဲ့ စကားသံလေးကို ကြားလိုက်ရတော့ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူး။ ”ရုပ်ရှင်ပြီးရင် တစ်နေရာရာသွားရအောင်ကွာ…။” ကျနော့်ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ်။ ချို တစ်ချက်ငြိမ်သွားတယ်။ သူလည်းစဉ်းစားနေတယ်ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ခပ်လေးလေးတစ်ချက်ပြောတယ်..။ ”အင်း….သွားမယ်လေ” တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်နဲ့ ချို ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ မြို့ပြင်က ဟိုတယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားကြတယ်။ ဟိုတယ်ရှာရတာတော့သိပ်မခက်ပါဘူး။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းက ကျနော်သွားချင်သွားရအောင်ဆိုပြီးပြောထားလို့ သိပြီးသားဆိုတော့ သိပ်မရှာလိုက်ရဘူး။ ဟိုတယ်ရီစက်ပ်ရှင်ကို ဖြတ်တော့ ချိုတော်တော်ရှက်နေတယ်ထင်တယ်။ ခေါင်းကိုလုံးဝမဖော်ဘူး။ ကျနော်ကတော့ ခပ်တည်တည်ပေါ့ဗျာ..။ ကိုယ့်မြို့မှမဟုတ်တာပဲ။ ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာ။ အဲလိုနဲ့ အခန်းလေးထဲရောက်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာစကားမှမပြောဖြစ်ကြဘူး။
ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာသာ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းဖက်နမ်းပြီး အဝတ်တွေကမန်းကတန်းချွတ်ကြတာ။ ကျနော်နဲ့ ချိုကတော့ တော်တော်ကြာအောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိုင်ကြည့်နေကြတာ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာတော့ ကျနော်ဒီကလေးလေးကိုခေါ်လာတာမှားများမှားသွားပြီလားပေါ့။ ကျနော့်သူ့ကို လက်မထပ်ခင်အထိ လွန်လွန်ကျူးကျူးလုပ်ဖို့ လုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူးလေ။ တအောင့်လောက်နေတော့ ချို့ဆီက သက်ပြင်းချပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောလာတယ်။ ”ကို.. ချို့ကို တကယ်ယူမှာလား” တဲ့….။
ကျနော်လည်း ချက်ချင်းပဲခေါင်းငြိမ့်ပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ”ကိုယ် ချို့ကို တကယ်ချစ်တာပါ။ အတည်လက်ထပ်ယူမှာပါ” လို့ပေါ့။ ပြီးတော့မှ ကျနော့် ချို့နားအသာလေးတိုးပြီး ချို့ပခုံးလေးကို တော်တော်ကြာကြာသိုင်းဖက်ထားမိတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေသံလေးနဲ့ပဲ … ” ချို… လည်းတစ်နေကုန်လျောက်သွားထားတာညောင်းနေတော့မယ်…။ လာ… ဒီမှာအိပ်” ဆိုပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲချလိုက်ပြီး ကျနော့်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို ဘေးမှာချထားလိုက်တယ်။ ကျနော့်လက်မောင်းပေါ်မှာ ချို ခေါင်းအုံးပြီးအိပ်ရအောင်ပေါ့။ ချိုလည်း ကျနော့်လက်မောင်းပေါ်မှာခေါင်းအုံးပြီး အသာလေးလာအိပ်တယ်။ ကျနော် ချို့နဖူးပေါ်မှာ ဝဲကျနေတဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို အသာသပ်တင်ပေးရင်း ချို့နဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ ချိုက ခေါင်းလေးအသာစောင်းရင်းကျနော့်ဘက်ကို အသာလှည့်ကြည့်တော့ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတဲ့ တစ်ချက်မှာ ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူး။
ခေါင်းကို အသာငုံ့ရင်း ချို့ နှုတ်ခမ်းပါးနီနီလေးကို အသာနမ်းစုတ်လိုက်မိတယ်။ ချို နဲ့ နမ်းရတာ ဘယ်တော့မှ နမ်းလို့မဝဘူး။ တော်တော်လေးနမ်းလို့ကောင်းတယ်။ ကျနော် ချို့ နို့သီးလုံးလုံးလေးတွေကို အကျီပေါ်ကနေ အသာချေမိတော့ချိုက … ”လူဆိုးလေး အကျီတွေကြေကုန်တော့မယ်။ ပြန်ရဦးမယ်လေ” တဲ့…။ ခပ်ညုညုအသံလေးနဲ့ပြောတော့မှ ကျနော်လည်း သတိဝင်လာတော့တယ်။ ”ဆောရီး… ချို…။ အကျီတွေချွတ်ထားရအောင်နော်” ဆိုပြီး ကျနော်လည်း ချိုခေါင်းအုံးထားတဲ့ ကျနော့်လက်မောင်းကို အသာဆွဲထုတ်ပြီး ထလိုက်တယ်။ တစ်ဆက်ထဲ ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ စပို့ရှပ်ကိုလည်း ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ချို အိပ်နေရင်းနဲ့ ကျနော်အကျီချွတ်တာကိုကြည့်နေတယ်။ ”ဘာကြည့်တာလဲ…။
ချိုလည်း ချွတ်လေကွာ” ဆိုတော့မှ.. ချို အိပ်နေရာကနေအသာထလာတယ်။ ”ကိုချွတ်ပေးလေ ” ဆိုပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ဘေးကိုကားပေးတယ်။ ချိုဝတ်ထားတာက ချည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်ရင်ဖုံးအကျီလေးပါပဲ။ ကျနော်လည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲ ချို့အကျီလေးဆီကို လက်လှမ်းပြီး ချို့ အကျီကြယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံချင်းစီဖြုတ်ပေးမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်လက်တွေတုန်နေမယ်ဆိုတော့ ကျနော်သေချာပြောရဲတယ်။ ကြယ်သီးလေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့ အကျီကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ချိုရဲ့ ရင်သားဖွေးဖွေးလေးနှစ်မွှာက အပြာနုရောင်ဘော်လီလေးနဲ့ အတူပေါ်လာတယ်။ ချို့ နို့လေးတွေကအရမ်းမကြီးဘူး။
အနေတော်ပဲ။ ကျနော့်လက်နဲ့ တစ်အုပ်စာပေါ့။ ဥပမာပေးရမယ် ဆိုရင် လိမ္မော်သီးခပ်လတ်လတ်တစ်လုံးစာလောက်ရှိမယ်။ ကျနော် ချို့နို့သီးလေးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ချေချင်စိတ်ကို အသာထိန်းရင်း… ”ချို … ခဏထဦးနော်… ထဘီပါချွတ်ရအောင်ဆိုတော့…။” ”အဲဒါတော့ ကို မချွတ်ပေးနဲ့…။ ချိုရှက်တယ်…။ ချို့ဘာသာချိုချွတ်မယ်…။ ဟိုဘက်လှည့်”ဆိုတာနဲ့ သူစိတ်ကျေနပ်အောင် ကျနော် တခြားဘက်လှည့်ပေးထားလိုက်တယ်။ ”ရပြီ….။ ဒီဘက်လှည့်တော့” ဆိုမှ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့….. ဝှား….. ချိုက ထမိန်တင်မဟုတ်ဘူး ။ ဘော်လီရော၊ အတွင်းခံပါတစ်ခါထဲချွတ်ထားတာ။ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ရင်ဘတ်ကို အသာယှက်ထားရင်း ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်လည်း ပေါင်ဂွကြားကိုအုပ်ထားတယ်။
ကျနော်လည်း ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ခပ်မြန်မြန်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ အတွင်းခံပါ တစ်ခါထဲရောလိပ်ပြီး ဆွဲချွတ်လိုက်တာလေ။ အောက်က မာန်ဖီနေတဲ့ ညီတော်မောင်ကတော့ အောက်က တထောင်ထောင်နဲ့ပေါ့။ ကျနော့် ကို မျက်လုံးလေးပြူးပြီးကြည့်နေတဲ့ ချိုကို ပွေ့ချီပြီး နှစ်ယောက်အိပ်မွှေ့ယာကြီးပေါ်ကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ စပရိန်မွှေ့ယာဆိုတော့ ချို့ကိုယ်လုံးလေးက အိကနဲ ကျသွားပြီးတော့ ပြန်မြောက်တက်လာတာပေါ့။ ချိုလည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ မွှေ့ယာကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ထောက်လိုက်တော့ သူအုပ်ထားတဲ့ ဟာလေးတွေ ပေါ်သွားတာပေါ့။ ကျနော်လည်း တစ်ခါထဲ သူ့ အပေါ်ဒိုင်ပင်ထိုးပြီး မှောက်အိပ်လိုက်တယ်။ ကျနော် ချို့ကို အပေါ်ကနေ မိုးပြီးကြည့်ရင်း ချို့နဖူးလေးကို အသာနမ်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ချို့နှုတ်ခမ်းပါးလေး…။ ချိုကတော့ ကျနော့် လည်ပင်းကို အသာလေးသိုင်းဖက်ထားတယ်။ ကျနော် လက်တစ်ဖက်ကို ချို့ ဘေးမှာထောက်ထားရင်း ၊ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ညီတော်မောင်ကို အသာထိန်းပြီး ချို့ ညီမလေးတစ်လျှောက်အစုန်အဆန် ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ချို ညီမလေးမှာအရည်တွေ ထွက်နေပါပြီ။ ကျနော်ကသာ ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုတော့ ကိုယ့်ချစ်သူနာမှာစိုးလို့ လုပ်ပေးနေမိတာပါ။ ကျနော် အဲလိုပွတ်ပေးလိုက်တော့ ချိုလည်း အသက်ရှုသံတွေမြန်လာပြီး သူ့တင်ပါးလေးကိုကော့ကော့တင်ပေးလာတယ်။
သူလည်း မရိုးမရွဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ကျနော်ညီတော်မောင်ကို အသာထိုးထည့်လိုက်တော့မဝင်ဘူးဗျာ…။ အပြင်ကိုချော်ပြီးထွက်သွားတယ်။ ကျနော်လည်း နောက်တစ်ခေါက်သေချာတည့်ပြီး ထိုးထည့်တော့မှာ ထိပ်ဖျားလေးဝင်သွားတယ်။ ချို ကျနော့်ကို သိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်က ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ခပ်တင်းတင်းတွန်းပြီး… ”မရဘူး…. နာတယ်… နာတယ်” လို့ပြောတော့ ကျနော်လည်း ဇောချွေးတွေပြန်လာတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော် အတွေ့မကြုံမရှိသေးတာလည်းပါတယ်။ ကျနော် တဖြည်းဖြည်းချင်းနှဲ့သွင်းရင်း တစ်ခါဖိသွင်းလိုက်တော့ ဖောက်ခနဲမြည်ပြီး ကျနော့်ညီတော်မောင်က ချို့ ညီမလေးထဲကို ကျွံဝင်သွားတယ်။ တည်းခိုခန်းကလည်း တိတ်နေတာဆိုတော့ အဲဒီ အပျိုမှေးပါးလေးပေါက်သွားတဲ့ အသံလေးက ကျနော့်နားနဲ့ တကယ်ကိုကြားလိုက်မိတယ်။ ချို ပါးစပ်လေးဟ ပြီး ”အာ့” လို အော်ရင်း ခေါင်းလေးမော့လာတယ်။
ကျနော်ကတော့ ချို့နှုတ်ခမ်းကို ခပ်မြန်မြန်လေးဖိဖိနမ်းရင်း အောက်က ညီတော်မောင်ကို အသာလေးငြိမ်နေပေလိုက်တယ်။ ခဏလောက်နေမှ ချို့ တင်ပါးလေးတွေ ကော့ကော့တင်ပေးလာတာနဲ့ ညီတော်မောင်ကို နည်းနည်းချင်းပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်နဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ တော်တော်လေးကြာတော့ ချိုလည်းခံနိုင်လာတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော် အသွင်းအထုတ်လုပ်တိုင်း အောက်က ကော့ကော့လာတာနဲ့ ကျနော်လည်း ချို့ နို့သီးလေးခေါင်းနီနီလေးတွေကိုလည်း အသာငုံ့ပြီးစို့ရင်း ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်လိုက်တယ်။ ချို့ညီမလေးက တင်းပြီး ကြပ်နေတာပဲဗျာ..။
ဒါပေမဲ့ ကျနော် တော်တော်နဲ့ မပြီးဘူး။ ကျနော်လည်း စိတ်ကကြောက်နေတာနဲ့ ပြီးတဲ့ဆီကို မရောက်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ချိုနာသွားမှာစိုးတဲ့ စိတ်နဲ့ ပဲ အသာလုပ်နေရင်းက သူကော့ကော့တင်ပေးလာလို့ ကျနော်လည်းခပ်မြန်မြန်ဆောင့်ပေးမိတာ။ ချို အသက်ရှုသံတွေမြန်လာပြီး ကျနော်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လာတော့ ကျနော် ခပ်သွက်သွက်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ချို လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ရင်း ငြိမ်ကျသွားတယ်။ အဲတော့မှ ကျနော်လည်း ချိုသာပြီးသွားတယ် ကျနော်မပြီးသေးပါလားဆိုပြီး စိတ်ကို ညီတော်မောင်မှာထားပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ ချိုကတော့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးငြိမ်သွားပြီ။
ကျနော့်ကို ဖက်ထားတဲ့လက်တော့ကိုတော့ မလွှတ်သေးဘူး။ ကျနော် စိတ်ကိုသွင်းပြီးဆောင့်လိုက်တော့ မကြာပါဘူး။ ချို့ ညီမလေးက အရမ်းကြပ်တာနဲ့ပဲ ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်။ တစ်ပတ်လောက်အောင်းထားတဲ့ အရည်တွေက ချို့ အသစ်စက်စက်အဖုတ်လေးထဲမှာအပြည့်ပဲ။ အပြင်ကိုတောင်လျှံကျလာတယ်။ ကျနော်လေး ချို့ဘေးမှာ အသာလှဲချရင်း ချို့ကို ကျနော့်ဘက်ဆွဲလှည့်ပြီး ရင်ခွင်ထဲမှာ ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။ ကျနော့် အသက်နဲ့ တမျှချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေး…၊ ကျနော်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးအခြေအနေထိရောက်သွားခဲ့လို့လေ။
”ချစ်တယ်….. ချိုရယ်…..။” ကျနော် သူ့ကို တိုးတိုးလေးပြောရင်း ချို့နဖူးမှာကပ်နေတဲ့ ချွေးစလေးတွေကို တယုတယသုတ်ပေးမိတယ်။ ”ချို….. နာနေလား…။” ကျနော်မေးတော့… ”ပထမဝင်တုန်းကတော့ တော်တော်နာတယ်….။ နောက်ကျတောမနာတော့ဘူး … ”တဲ့။ ဒါဆို ကောင်းရော ကောင်းရဲ့လား ဆိုတော့ ”အင်း…. အရမ်းကောင်းတယ်” လို့ပြန်ဖြေတယ်။ တကယ်တော့ ချိုရော ကျနော်ရော ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ ကျနော် တော်တော်နဲ့ မပြီးသွားတာက ချို့ကို ပထမဆုံးဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ အပျိုမှေးလေးပေါက်လို့ နာယုံမဟုတ်ပဲ တော်တော်လေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့လေ။ ကျနော် ချို့ကို ရင်ခွင်ထဲမှာ အတော်ကြာအောင်ဖက်ထားပြီး ချို့မျက်နှာလေးကို ကြည့်နေမိတယ်။
ချိုကတော့ မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး မှိန်းနေတယ်။ သူလဲ တော်တော်ပင်ပန်းသွားပုံပါပဲ။ နာရီဝက်လောက်မှိန်းနေကြပြီးတော့မှ နှစ်ယောက်သား သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်က ပြန်အထွက် ချိုလမ်းလျောက်တာ ကွတကွတဖြစ်နေလို့ ကျနော်တောင်စမိသေးတယ်။ ချိုကတော့ မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကျနော့် ကျောပြင်ကို မနာအောင်ထုတာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ချို့ကို ပြန်ပို့ခါနီး ဆေးဆိုင်ဝင်ပြီး တားဆေးလိုက်မိသေးတယ်။ တစ်လုံးကို ချက်ချင်းတိုက်ပြီး နောက်တစ်လုံးကို တော့ အိမ်ပြန်ရောက်မှသောက်ဖို့ပေးလိုက်တယ်။ လက်မထပ်ခင် မဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ရသေးတာမဟုတ်တော့ လွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်သင့်သေးဘူးလေ။
ဒီတစ်ခေါက် ကျနော် အိမ်ပြန်လာတော့ ချို့ကို ပိုပြီးလွမ်းလာတယ်။ ချိုနဲ့ ကျနော်လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပိုပြီး ချစ်လာသလိုပဲ။ အဲလိုနဲ့ အစရှိသွားတော့ ကျနော် ချို့ဆီရောက်တိုင်း ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပဲအချိန်ဖြုန်းဖြစ်တာများတယ်။ ဟိုဟာလုပ်တော့လည်း ပထမစလုပ်တုန်းကလို ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး၊ ပုံစံအစုံပဲ၊ ပက်လက်၊ မှောက်ရက်၊ လေးဘက် ၊ မတ်တပ် …..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အရမျးကောငျးတယျ